That's so good, right?: April 2017
သူဆိုင်ထဲကို ပိတ်ခါနီးအချိန်လေးမှ ကပ်ပြီးဝင်လာတယ်။ ဆိုင်ပိတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတုန်း စာရင်းချုပ်နေစဉ်မှာပေါ့။ မွှေးရီရီအနံ့ တစ်မျိုးကြောင့် သတိထားမိပြီး မျက်လွှာပင့်ကြည့်လိုက်မှ ရင်ထဲ ဒိန်းကနဲဖြစ်သွားရတယ်။ အလွန်တရာကို ချစ်ခင်နှစ်သက် ဖို့ကောင်းတဲ့ ပုံစံလေးဝတ်ဆင်ထားသလို ပါးချိုင့်လေးနဲ့ baby face ပိုင်ရှင်လေးလေ။
'ကျွန်တော် ဆိုင်ထဲလျှောက်ကြည့်ဖို့ အချိန်ရသေးလားဗျ'
နားထဲမှာ ရှတတနဲ့ အသံလေးကတစ်မျိုးပါလား။ ဘယ်လောက်နားဝင်ချိုအောင်ပြောတတ်တဲ့သူပါလိမ့်။
'အိုး...ရတာပေါ့ညီ၊ စိတ်ကြိုက်ကြည့်၊ အခုမှပြန်ဖို့ပြင်ဆင်နေတုန်းပါ။ ကြည့်ပါ ...အဆင်မပြေတာရှိရင် ပြောနိုင်ပါတယ်။'
ကျွန်တော်က ဟောင်ကောင်၊ ထိုင်ဝမ်နဲ့စင်ကာပူက အမျိုးသားဝတ် အင်္ကျီ၊ဘောင်းဘီက အစ ရေမွှေးအဆုံး တင်သွင်း ရောင်းချသူပါ။ တစ်လတစ်လ အသစ်ပေါ်သမျှ မထပ်အောင်ရောင်းချနိုင်တဲ့အတွက် လူငယ်တွေတော်တော်များများနဲ့ စည်ကားနေကျဆိုင်တစ်ဆိုင် ဖြစ်နေပါပြီ။ ရောင်းချပုံ၊ ခင်းကျင်းတင်ပြပုံ၊ ပရိုမိုးရှင်းကအစ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဦးစီးပါ တယ်။ အရောင်းသမားကောင်လေးတွေကိုလည်း အလန်းလေးတွေချည်းခန့်တားတာပေါ့ဗျာ။
ဒီကောင်လေးပုံစံက ကျွန်တော့်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေတဲ့ အမျိုးသားပုံစံထဲမှာပါတယ်။ အသက်ငယ်တယ် အလွန်ဆုံးရှိလှ 19 နှစ်လောက်ပဲရှိဦးမယ်။ Latest baggy fashion ကိုအမိစားဝတ်ထားတာ။ ကျွန်တော်ပြောနိုင်တာကတော့ ကျစ်လျစ်သွယ် လျတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူပဲဆိုတာပေါ့။ သူ့ရဲ့လှိုင်းတွန့်ဆံပင်လေးတွေက နားရွက်နောက်ဖျားဆီ ကပိုကယိုကျ လို့။မျက်လုံးလေးတွေကလည်း ကြယ်စင်လေးတွေအလား တောက်ပနေတာများ နုငယ်ပျိုမျစ်မှုအပြည့်။
ကောင်ငယ်လေး သွားလာလှုပ်ရှား ရွေးချယ်ကြည့်ရှုနေတာကို တီဗီစကရင်မ်က မျက်ခြည်မပြတ်ကြည့်မိရရင်း ပေါင်ကြား က ကျွန်တော့်ညီဘွားက မာထောင်လာတယ်။ ဘယ်လိုမှတားလို့မရဘူး။ လမ်းလျှောက်ပုံ၊ တင်ပါးလုံးကျစ်ကျစ်တွေ ပစ္စည်း ရွေးကောက်ကြည့်ရှုနေဟန်တွေက ကျွန်တော့်စိတ်ကို ပိုပြီးကြွစေတယ်။ ဟူး.....
၁၀မိနစ်လောက် အကြာမှာတော့ ဈေးဝယ်မယ့်ကောင်ငယ်လေး...ကောင်တာဆီလှမ်းလာပြီး အညိုရောင်မျက်တောင်ရှည် ကြီး ပုတ်ခတ် ပုတ်ခတ်ဖြင့် နှောင့်ယှက်ရမှာ အားနာတယ်ဗျာ၊ ဒါပေမဲ့ သန့်စင်ခန်းရှိလားမသိ၊ ကျွန်တော်ခဏလောက်သုံး ချင်လို့ဗျ တဲ့လေပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်ထိုင်နေတဲ့ ကောင်တာရဲ့ နောက်ဘက်နားမှာ သန့်စင်ခန်းရှိပါတယ်။ အာကြီးကြီး တော့မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ အရေးပေါ်သုံးနိုင်ပါတယ်။
'ဒီဘက်က ၀င်ခဲ့ညီ၊ ဟိုမှာသွားသုံးလို့ရပါတယ်၊ မီးဖွင့်လိုက်ဦးနော်'
အာ...မျက်စိတောင် ယောင်ယမ်းပိတ်မိလိုက်ရသေးတော့။ သန့်စင်ခန်း မရောက်ခင်မှာပဲဘောင်းဘီကဇစ်ကိုဖြုတ်လိုက်တာ ကြောင့်လေ။ ပြီးတော့ သူ့ လဒစ်ကိုဆွဲထုတ်ကိုင်ပြီးမှ ၀င်သွားတယ်လေ သန့်စင်ခန်းထဲကို။ နောက်မှန်ချပ်တွေကတစ်ဆင့် မြင်နေရတာက သန့်စင်ခန်းတံခါးကို မပိတ်ဘဲ သူဆီးသွားနေတာကို။
ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ ဘာမှမမြင်ရတော့ပေမဲ့ ကြွေကမုတ်ထဲ ရေပူပေါင်းတွေ ပလုံစီထအောင် ရွှေပြွန်ကရေသွန်နေ သံကိုတော့ နားထောင်နေမိရပေါ့။
'အစ်ကို ဒီဆိုင်မှာ လုပ်တာကြာပြီလား' စကားပြောဖို့လမ်းစရှာတဲ့အနေနဲ့ မေးခွန်းလေးတစ်ခုနဲ့ သူအစပြုလေရဲ့။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘာဆိုတာ အမှန်ပြောပြဖို့ မလိုသလိုအလုပ်အကိုင်ရာထူးကိုလည်း ပြောဖို့မသင့်ဘူးထင်တာကြောင့် 'တစ်နှစ်လောက်ရှိပြီကွ'လို့ပြင်ပေးလိုက်ရတယ်။ စာအုပ်စာတမ်းတွေသိမ်း ရှေ့တံခါးကို လော့်ခ်ချကာ သန့်စင်ခန်းနားက ဆိုဖာမှာ မယောင်မလည်သွားထိုင်လိုက်ချိန်မှာ သူ့ရဲ့ခရမ်းသီးလို ရှည်ရှည်နဲ့ထွားတဲ့ ငပဲကို နောက်ဆုံးဆီးတစ်စက်အား ခါချရင်း ကြွေကမုတ်ကရေဘုကို လှမ်းနှိပ်လိုက်လေတယ်။
သူ့ရဲ့ လတ်ဆတ်ပျော့ပျောင်းတဲ့ ငပဲရှည်ရှည်ကို သူ့ဘောင်းဘီထဲပြန်သွင်းစပြုလိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ တံခါးဘက်ကို မျက်နှာမူ ပြီး မလှမ်းမကမ်းက ကျွန်တော့်ကို မြင်သွားချိန်မှာတော့ ဇစ်ကိုဆွဲမတင်တော့ဘဲ ရပ်လိုက်တာပေါ့။ ထိုင်နေတဲ့ ကျွန်တော့် ပေါင်ကြားက ထောင်နေတဲ့ အမြှောက်ကို သူသတိမူသွားမိဟန်တူပါတယ်။ 'ဟို...ဒီထက်ပိုပြီး ကြည့်ချင်သေးတာလားဗျ ' လို့မေးရင်း သူ့ဘောင်းဘီထိပ်က ကြယ်သီးတွေကို စမ်းဖြုတ်ပါရော။
'ဒါပေါ့ မင်းတစ်ကိုယ်လုံးကို ကြည့်ချင်တာပေါ့'
ကတုန်ကယင်နဲ့ အဲဒီစကားလုံးတွေ ကျွန်တော့်နှုတ်ဖျားက ထွက်ကျလာတယ်။ အခုတွေ့ အခုဇာတ်လမ်းစဆိုတော့ သိက္ခာများ မဲ့သွားမလားစိုးရိမ်မိတဲ့စိတ်အခံကြောင့်ထင်ပါ့။
'မင်းဆိုင်ထဲဝင်လာတုန်းကတော့ ကိုယ်ဘာမှ မျှော်လင့်ခံစားချက်မရှိဘူးနော် အဲဒါသေချာတယ်'
'ကျွန်တော်လည်း အစ်ကို့လိုပါပဲ၊ အ၀တ်အစားတွေလျှောက်ကြည့်ရင်း အစ်ကို့ဘော်ဒီနဲ့ နှုတ်ခမ်းထူထူကို သဘော ကျမိသွားတာ'
ကျွန်တော့်အသက်က ၃၀ကျော်ပြီ တကယ်တမ်း ဒီကောင်လေးရဲ့ ဦးလေးအရွယ်တောင်ဖြစ်လောက်တယ်။
'ကျွန်တော့်ထက် အသက်ကြီးသူကို ပိုကြိုက်တယ်ဗျ'
သူ့အင်္ကျီက ကြယ်သီးတွေကို ဖယောင်းတိုင်လို သွယ်ပျောင်းတဲ့ လက်ချောင်းတွေနဲ့ ကတုန်ကယင်ဖြုတ်ရင်း မပီမသ ပြောပြန်တာ။
'အသက်ကြီးတဲ့သူတွေက ဖီးလ်ကောင်းအောင် အထူးကိုလုပ်ပေးကြတယ်'
'မင်းက အထူးစပါယ်ရှယ်မို့ သူတို့ကလည်း အထူးစပါယ်ရှယ် ပြုစုကြတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကွ'
တဖြည်းဖြည်းပေါ်လွှင်လာတဲ့ သူ့ဘော်ဒီအစိတ်အပိုင်းတွေကို မျက်စိနဲ့ စေ့ငုကြည့်ရတာကတော့ ပခုံးကျယ်ကျယ်၊ နူးညံ့တဲ့မွှေးညင်းလေးတွေနဲ့ အသားအရေ၊ ခါးကျဉ်ကျဉ်လေးနဲ့ ဖျစ်ညှစ်ချင်စဖွယ်လေးပါပဲ။
ကျွန်တော့်နှလုံးခုန်သံတွေဟာ သူဘောင်းဘီတွေ ချွတ် ရှူးဖိနပ်ကို ကန်ထုတ်လိုက်ချိန်မတော့ တဒုတ်ဒုတ်နှင့် မြန်ဆန်စပြု လာတယ်။ အရပ်ရှည်ရှည်နဲ့ လိုက်တဲ့ သူ့ငပဲရှည်ရှည်ဟာလည်း နည်းနည်းမာစပြုလာသလို သူ့ Jockey short နဲ့ တွန်း ကန်စဖြစ်လာပါရဲ့။ ခြေချင်းဝတ်မှာ ကျန်နေတဲ့ သူ့ဘောင်းဘီကို ကုန်းချွတ်ချိန်မတော့ သူ့ဆံနွယ်တွေ မျက်နှာတစ်ဝိုက် ဝေ့၀ဲကျလာတာများ ကြည့်လို့ အတော်ကောင်းပါတယ်။ ခုံအမြင့်မှာ ထိုင်နေတာဆိုတော့ သူ့အ၀တ်တွေ ကိုယ်ခန္ဓာမှာ မရှိချိန် အပေါ်စီးကနေ ရင်ခုန်သံမြန်စဖွယ် မြင်နေရတာပေါ့ဗျ။ ဟူး....ကောင်လေး You make me horny..
'အစ်ကိုတစ်မျိုးမထင်ပါဘူးနော်၊ ကျွန်တော် တစ်ခုခုမျှော်လင့်ပြီးလုပ်နေတဲ့ပုံ ပေါက်နေလို့လားဗျာ'
တိမ်းမူးဖွယ်ဆွဲဆောင်မှုကောင်းတဲ့ သူ့အသံညှင်းပျောင်းပျောင်းနဲ့ မေးလာတော့ ကျွန်တော် ဘာဖြေရမှာလည်းလေ။ 'ဟင့်အင်...'
သူ့ရင်ဘတ်ကလေး၊ ပြီးတော့ ချက်ကလေး၊ ဆီးစပ်ကလေးတွေမှာ မွှေးညှင်းနုလေးတွေက တဆက်တည်းပေါက်နေတာ ရင်ခုန်စဖွယ်တစ်မျိုးတစ်ဘာသာဖြစ်နေရော။ သူ့ခြေတွေ၊ လက်ဖမိုးတွေမှာ အဲဒီလောက် အမွှေးအမျှင်မထူပါဘူး။ လက် ဖ၀ါးနှင့် ညင်ညင်သာသာကိုင်တွယ်ပွတ်သပ်ကြည့်တော့ နူးညံ့လိုက်တာ 'သားမွှေး' တွေအတိုင်း။
'You're absolutely beautiful"
ကျွန်တော့ရင်တွေ ကတုန်ကယင်နှင့် တဆတ်ဆတ်တုန်ပြီး ပါးစပ်က အသံခပ်ယိုင်ယိုင်ဖြင့် ပြောလိုက်မိပါတယ်။
ကောင်ကလေး သူ့လက်ချောင်းတွေနဲ့ ရင်အုပ်၊ ဘယ်လီပြီးတော့ ဆီးခုံမွှေးတွေကို သူ့ဟာသာ မာန်ဟုန်မြှင့်နေလေတယ်။ ကျွန်တော်က သူ့တစ်ကိုယ်လုံးကို မွှေးညှင်းပေါက်မကျန် ငေးမောနေမိပါတယ်။ မမာ့တမာ ရွှေငှက်ပျောသီးက ခပ်ထောင်ထောင်၊ ရွှေဥကြီးတွေက လည်း လုံးဝန်းကြီးမားနေတာများ လိင်စွမ်းပကားအပြည့်ဖြည့်ပေးနိုင်ဟန်ပါ။
လျှပ်စစ်စီးကြောင်းတစ်ခုလို ရှိ့တို့ရှန်းတန်းဖြစ်မှုလှိုင်းလုံးတစ်ခုဟာ ကျွန်တော့်ကိုယ်ခန္ဓာကို ပစ်ခတ်လိုက်သည့်အလား ခံစားလိုက်ရ ပါတယ်။ ကောင်ကလေး သူ့ရဲ့ဝိုင်းစက်ပြည့်တင်းနေတဲ့ တင်ပါးတွေကို ကျွန်တော့်ဘက်လှည့်ပြီး နည်းနည်းကော့ပြလိုက်ချိန်မှာပေါ့။ သူတောင်ကြားလမ်းထဲမှာ မွှေးညှင်းနုလေးတွေတောထနေသလို ပေါင်ကြားထဲကနေ သီးမွှေးငှက်ပျောရှည်ကို ရင်ခုန်စဖွယ် မြင်နေရ ပါတယ်။ သူ့ဆီးသွားလမ်းဝမှာ အရည်ကြည်အချို့ထွက်စပြုနေတာကို မြင်ရချိန်မှာတော့ ဒီကောင်လေး သိပ်ကြာကြာ မထိန်းနိုင်တော့ ဘူးဆိုတာ ရိပ်မိရတာပေါ့။
နူးညံ့ပြည့်တင်းတဲ့ တင်ပါးတွေကို ပွတ်သပ်ကိုင်တွယ်ကြည့်တာ တော်တော်ရင်ခုန်တိမ်းမူးဖွယ်ရာပင်။ မိန်းကလေး တင်ပါးတွေထက် ကျစ်လစ်မှု တင်းရင်းမှုက စိတ်ကိုပိုကြွစေတယ် ကျွန်တော့်အတွက်လေ။
'အဲဒီ ဖီးလ်က အရမ်းကောင်းတယ်ဗျာ...အ'
'တင်ပါးတွေ ပွတ်သပ်ပေးတာကိုခံရတာကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်၊ အဲဒါကို ပွတ်သပ်ထိကစားပေးရင် ဘယ်လိုမှ မထိန်းနိုင်ဘူး၊ ရင်ထဲမီးတောက်သလို ဖီးလ်အရမ်းထိတယ်ဗျ'
အသားအရေကဖြူတာလည်းမဟုတ် ညိုတာလည်းမဟုတ် ၀င်းဝင်းဝါ၀ါနှင့် အတော်ဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်။ အာ...သှူုငပဲကို အသာကိုင် တွယ်လိုက်တဲ့အခါ ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲက သွားရည်တွေ အလိုလိုစိမ့်ထွက်လာမိသလားပဲ၊ တံတွေးကို ဂလုကနဲမြည်အောင် မျိုချပစ်မိ ရပါ့။ ထိပ်အရေပြားဖြတ်ထားသူမို့ ကွမ်းသီးခေါင်းက helmet shape ပုံသဏ္ဌာန် ဖူးဖူးရွရွ။ ညင်ညင်သာသာ ကိုင်တွယ်ပြီး အထက် အောက် လှုပ်ရှားပေး ချိန်မှာတော့ တစ်ဝက်တစ်ပျက်မာနေတဲ့ ရွှေငှက်ပျောဟာ ဒုံးပျံထိပ်ဖူးအလား ထောင်ထလာပါတယ်။ Good!
ထိပ်ဖူးက အ၀လေးကို လျှာဖျားလေးနဲ့ မထိတထိ တို့ကစားလိုက် ကွမ်းသီးခေါင်းကိုငုံလိုက်နဲ့ ကလိပေးတော့ သူ့ခမျာ တင်ပါးလေးတွေ တဆတ်ဆတ်တုန်ယင်လာကာ ကျွန်တော့်အပြုအစုမှာ နစ်မျောစပြုလာနေပါပြီ။ အတံတစ်လျှောက် လျှာနဲ့ကလိမိတော့မှ သူ့ငပဲတော် တော်ရှည်ပြီး ထွားမှန်း သတိမူမိပါတယ်။ လူတစ်ယောက်မှာ ကိုယ်နံ့တစ်မျိုးစီရှိတတ်ကြတာမှန်ပေမဲ့ ဒီကောင်လေးရဲ့ အရည်ကြည်က ထွက်တဲ့အနံ့က လိင်စိတ်ကိုကြွစေသလား....တစ်မျိုးတစ်မည် ဖြစ်ကရော့ ရင်ထဲ။ ကြိုက်တယ်....သူ့ဒစ်တစ်ချောင်းလုံးနမ်းစုပ်ရတာကိုပေါ့။ ဖြစ်နိုင်ရင် တစ်ကိုယ်လုံးနေရာလမ်မကျန် လျှာနဲ့လျက်ပေးချင်မိတော့။
'လူတွေတော်တော်များများက ထိပ်လေးလောက်ပဲ စုပ်ပေးကြတာ။ လွန်ရောကျွံရော တစ်ဝက်လောက်ထိပေါ့ ...အ...အ။ အစ်ကိုက...အစ်ကိုက အဆုံးထိ အားရပါးရစုပ်ပေးတာ...အ...အ ဖီးလ်ပဲဗျာ..I love it.'
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပါးစပ်ထဲပြည့်လာသလို ခံစားရပါတယ်။ သူလေးက ကျွန်တော့်ပုခုံးကို အသာကိုင်ရင်း ခါးကို အနည်းငယ်ရှေ့ထိုး နှောက်ငှင် လုပ်စပြုလာပါပြီ။ ပါးစပ်ထဲငုံစပ်ထားရင်း ထိပ်ပေါက်ဝလေးကို လျှာဖျားနဲ့ ကလိ လက်တစ်ဖက်ကလည်း မွှေးညှင်းနုလေး တွေပေါက်နေတဲ့ balls တွေကို ကစားပေးရတာ အမိုက်စားပေါ့ သူ့အတွက်လေ။
အညိုရောင်ဆံနွယ်ခွေလေးတွေ ဝေ့၀ိုက်ကျနေသလို သူ့မျက်နှာမှာ ချွေးဥလေးတွေ ခိုတွဲစပြုလာပါပြီ။ မျက်နှာမှာတော့ ကျေနပ်အားရတဲ့ အပြုံးတွေက ပေါ်လွင်လျှက်ပေါ့။ အရင်းထိ ငုံထားရာကနေ အပြင်ကို ထုတ် လက်ကစားပေးရင် တွေကို တလှည့်ငုံစုပ်ပေးလိုက်တော့ 'stop it ...stop it'
'အစ်ကို...ကျွန်တော် မပြီး..မပြီးချင်သေးဘူး အား အ..'
ဆိုဖာပေါ်ကို အသာလှဲမှီချလိုက်ရင်း သူအမောဖြေလေတော့ သူ့ငပဲဟာ ဆီးစပ်မှာကပ်လျက်သား။ ၀ိုင်းစက်ပြည့်တင်းတဲ့ တင်သားများ ကြားက ခရေတွင်းကလည်း ပန်းသွေးရောင်ဖြင့် ခပ်ဟဟ။ နှုတ်ခမ်းသားများက စိုစွတ်နေသလို အရသာခံကျေနပ်နေပုံဖြင့် အပြုံးတစ်ပွင့် ပွင့်ပေါ်လို့။ ကျွန်တော် သူ့ခြေဖျားတွေကို အသာဆွဲကိုင် ဆိုဖာလက်ရန်းပေါ် သူ့တင်ပါးတွေအား အသာဖေးတင်လိုက်မိပါတယ်။ ဒူးတွေ ကို အသာကိုင် ရင်ဘတ်ဆီတွန်းတင်လိုက်စဉ်မတော့ ခရေတွင်းဝက လာပါယူပါ အစ်ကိုရယ် ဆိုနေဟန်ကြောင့် ဆောင့်ကြောင့် ထိုင်လိုက်ကာ တောင်ကြားလမ်းထဲမျက်နှာအပ်လိုက်ရပါရော။ လျှာဖျားလေးဖြင့် မျှော့သွေးစမ်းကာ မွှေးညှင်းနုလေးတွေကို ရစ်ကာ ၀ိုက်ကာဖြင့် ဆော့ကစားတယ်၊ ခရေ၀လေးကို မထိတထိကလိတယ်၊ ဒါဟာ ကျွန်တော့်စတိုင်လ်..။
ကောင်ငယ်လေး တစ်ကိုယ်လုံး တဆတ်ဆတ် တုန်ယင်ရင်း အသက်ရှူသံတွေဟာလည်း ဟာရီကိန်း.
'Oh fuck yes! Eat my ass'
'အ..အာ အစ်ကို့လျှာဖျားနဲ့ ကလိပေးပါ။ အတွင်းထဲထိုးပေးပါ....Make me wet.'
တင်ပါးအိအိတွေကို အသာကိုင် ခရေတွင်းလေးကို အသာဖျဲကာ ကျွန်တော့်လျှာဖျားကို တောင့်မာစေလျှက် ခပ်ဖြည်းဖြည်းထိုးသွင်း လိုက်ပါတယ်။ အပြင်ထုတ်လိုက် သွင်းလိုက်ကစားပေးရဂ်း တင်ပါးတွေကို ခပ်သာသာကိုင်ကြည့်ထားတာ ကျောက်ဆိုင်တွေအလား မာကျစ်လာပါရော။ Rocket ကြီးကလည်းမိုးပေါ်ညွှန်လျက်။
လေညှင်းနုနုဖြင့် သူ့balls တွေကို ထိခပ်လိုက် အနမ်းပေးလိုက်စဉ်မှာ ကျွန်တော်ခံစားရမိတာက သှူုငယ်မူငယ်သွေးအားလုံး balls တွေထဲ ခုန်ပေါက်လှုပ်ရှားနေသည့်အလား။
Air-con လေ တစ်ချက်အဝေ့ ကောင်လေးရုတ်တရက်ထထိုင်ကာ ကျွန်တော့်လည်ပင်းကို သူ့လက်မောင်းတွေနှင့် သိုင်းဖက်တယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းထူထူရှိရာ ငုံ့ကိုင်းလာရင်း အနမ်းဂဟေဆက်ကြပါတော့တယ်။ သူ့လျှာတွေတိုးဝင်လာသလို ကျွန်တော့် လျှာတွေကလည်း သူ့ပါးစပ်ထဲ တိုးဝင်ကာ အနမ်းအဖြေရှာကြတာ။
သူ့ခြေထောက်တွေက ကျွန်တော့်ခါးကို ဖက်တွယ်ထားသလို လက်မောင်းတွေက ကျွန်တော့်ခေါင်းကို ကိုင်ထားရင်း အနမ်းဖလှယ်ကြ ရတဲ့ အချိန်ကလေးဟာ ချစ်သူတွေအလား ခံစားရမိပါတယ်။ ကျွန်တော့် လက်မောင်းတွေနဲ့ သူ့တင်ပါးတွေကိုထွေးပိုက်ထားရင်း လျော့ချပေးလိုက်တော့ သူ့ကိုယ်လေးတဖြည်းဖြည်း လျှောကျသွားရင်း ကျွန်တော်နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်ရပ်သည့် အနေအထား ဖြစ်သွား ရပါတယ်။ သူ့ရဲ့နူးညံ့တဲ့ ကိုယ်လေးကိုထွေးပိုက်ထားရင်း သူ့တင်ပါးတွေ ကိုင်တွယ်ရတာ ညီဘွားထဲက နို့ရည်တွေထွက်သွား တော့မည့် အထိ ခံစားလိုက်ရပါတယ်။ တင်ပါးကိုကျုံ့ အသက်ကို မှန်မှန်ရှူရင်း ထိန်းရတာပေါ့ဗျာ။
သူ့လက်ဖ၀ါးတွေကလည်း ၀ါဂွမ်းဆိုင်တွေအတိုင်းပါပဲ။ အလုပ်ကြမ်းမလုပ်ရဘူး ထင်ပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေလက်ထက် ကောင်းပါ တယ် ကိုင်ရတာ။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ရင်အုပ်တွေ လက်မောင်းတွေကို တက်မက်မှုအနမ်းနဲ့အတူ ပွတ်သပ်ကိုင်တွယ်ပေးရင်း တီရှပ် တွေကို အသာချွတ်ပေးတော့တာ။ အသက်ရှူသံ၊ ခပ်နွေးနွေး ၀င်လေထွက်လေလေးတွေက ကျွန်တော့်နို့သီးခေါင်းတွေစီ ရိုက်ခတ်လာ တဲ့အခု ကျွန်တော့်ရင်ထဲ ပုဇွန်ဆိတ်လေးတွေက တဆတ်ဆတ်ခုန်။
ပူနွေးစိုစွတ်တဲ့ သူ့လျှာဖျားလေးက ကျွန်တော့်နို့သီးခေါင်းတွေစီ ဝေ့၀ိုက်ဆော့ကစား၊ သွးလေးနဲ့ မနာအောင်ကိုက်....ဒီကောင်လေး ကလည်း အလာသားပါပဲ။ သူ့ရင်ခုန်သံကိုလည်း ကြားနေရပါတယ်။
'I want your cock'
သူ့လက်တွေ ကျွန်တော့်ဘောင်းဘီထဲ အသာထိုးထဲ့ရင်း ဟိုကိုင်သည်ကိုင်နှင့် အားရပါးရဖြစ်လာတဲ့ သူ့မျက်လုံးတွေ အရောင်တောက် လာပါရော။
'အစ်ကို့ညီဘွားရဲ့ အရသာကို သိချင်နေပြီဗျာ'
ခပ်ကားကား ရပ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ပေါင်ကြားမှာ သူ ဒူးအသာထောက်လိုက်ရင်း ဘောင်းဘီဇစ်ကိုဖြုတ် အသာချွတ်လိုက်တာ ခပ်ထွား ထွား ကျွန်တော့်ညီဘွားဟာ မြင်ကွင်းထဲရှင်းကနဲ ထိုးထိုးထောင်ထောင်ပါ။
ဘာလုပ်မလည်း သူ ဘာလုပ်မလည်းဆိုတာ စောင့်ကြည့်မိရရင်း ငံ့လင့်မိပါတယ် သူ့အပြုအစုကို..'.အ...ရှီး ဂွတ်'
ကျွန်တော့်ငပဲကို အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းနဲ့ စူးစမ်းသည့်အလား သူ့နှုတ်ခမ်းသားတွေနှင့် ထိတွေ့တာ ကြက်သီးတောင်ထမိသေးတယ်။ စိုစွတ်တဲ့ပူနွေးတဲ့ သူ့ပါးစပ်ထဲ တဖြည်းဖြည်းစုပ်ယူတယ်..အ..အ။ ထိပ်အရေပြားလေးကို လျှာဖျားနဲ့ထိုးထိုးပြီး ကလိတယ်။ ပြီးတော့ ရှလွတ်ဆိုပြီး ဟင်းရည်သောက်သလို သူ့အာခေါင်ထဲထိ စုပ်ယူလိုက်တာ။ Damn... He isagood cocksucker...
သူ့လျှာတွေ နှုတ်ခမ်းသားတွေဖြင့် ကျွန်တော့်ညီဘွားကို အလောတကြီးပြုစုနေတာများ အသက်မရှူတော့မည့်အတိုင်း။ သူ့ခေါင်းကို လက်နဲ့ထိန်းကိုင်ပေးရင်း အရသာခံမိတဲ့ခဏ သူ့ရဲ့ talent ကိုသတိမူမိပါ့။ တကယ့်ကို First rate cocksucker တစ်ယောက်ပါပဲ။ ကျွန်တော့် orgasm ဖြစ်လုဆဲဆဲမှာ ကောင်ကလေးက ငပဲကို အသာထွေးထုတ်လိုက်ပြီး မတ်တပ်ထရပ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ နှစ်ဦးသား နှုတ်ခမ်းတွေက တက်မက်စွာ ထိတွေ့ကြပြန်တော့တာပေါ့။ နှစ်ဦးသား အားလုံးပေါက်ကွဲတော့မည့် အခြေအနေဖြစ်လုဆဲဆဲပါ။ သူတစ်ဖက်ကိုလှည့် တင်ပါးအိအိကို ကျွန်တော့်ငပဲဆီ အသာတွန်းရင်း
'အစ်ကို့ငပဲ ထွားထွားကြီးကို သွင်းပပစ်လိုက်လိုက်ဗျာ ...ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေးနော်...အ..အ'
ပန်းသွေးရောင် အသားဆိုင်နှစ်ခုကြားက ခရေတွင်းဝလေးကို လက်ညှိုးနှင့်လက်မသုံးပြီး အသာအယာဖြဲကာ ကျွန်တော့်ရွှေနီငှက် ပျောကြီးကို တခြားလက်တစ်ဖက်က ကိုင်ကာ ကွမ်းသီးခေါင်းမြှုပ်ရုံ အသာရှန်တိန်လုပ်ရတာ့သည်။ နည်းနည်းနှဲ့သွင်းသွင်းလိုက် ပြန်ထုတ်လိုက်လုပ်ရင်း ကောင်တာအံဆွဲထဲက Lube ကိုလှမ်းယူကာ ညှစ်ထည့်လိုက်သည်။ အဆင်ချောလာတဲ့ အသွင်းအထုတ်တွင် နှစ်ဦးသားမိန်းမောစပြုလာကြသည်။ ကျွန်တော် ထိပ်ပိုင်းလေးသာအသွင်းအပြု လှုပ်ရှားရင်း ခဏတာကျေနပ်နေမိသည်ပဲ။
ကျွန်တော် သိပ်အကြမ်းပတမ်းမလုပ်ဘဲ ထိပ်ပိုင်းသာ အသွင်းအထုတ်လုပ်နေရာကနေ အဆုံးထိ ဆတ်ကနဲ သွင်းချလိုက်တယ်။ သူ့ရဲ့ကျပ်နေဆဲ ခရေတွင်းဝထဲ တဆုံးမြှုပ်သွားချိန်မှာတော့ ခပ်မှန်မှန်လေး စည်းချက်နှင့်အတူ ဆောင့်မိရတော့တာပေါ့။
တော်တော်ကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့ အချိန်သာမယမှာ ကျွန်တော်တို့မျောပါသွားကြပြီ။ ဆိုင်ပိတ်ချိန်ကျော်လို့ လမ်းမီးတွေတောင်ဖွင့်ကြပြီ။ ဆိုင်ရဲ့နောက်ဖက် မကျတကျမှာ ကျွန်တော်တို့လေအလာမှာ ရိမ်းနွဲ့တဲ့ ကောက်ပင်ပျိုတွေလို ဟိုရိမ်းသည်ယိမ်း။
'ဆောင့်ပါဗျာ အစ်ကို.....အ..ခပ်ပြင်းပြင်းလေးဆောင့် အ....အ..အာ'
ကောင်ကလေးက သူ့တင်ပါးနှင့် ကျွန်တော့်ဆီးစပ်တွေ ရိုက်မိစဉ်အချိန်မှာ သူ့လက်ဖ၀ါးနုနုဖြင့် ကျွန်တော့်ပေါင်တွေ၊ တင်ပါးတွေ ပြီးတော့ ရွှေဥကို နောက်ပြန် လှမ်းလှမ်းကလိတာ၊ ကျွန်တော့် တစ်ကိုယ်လုံး ပူနွေးလာသလို သွေးကြောတွေ တဆတ်ဆတ် တင်ပါးတွေ မာကျစ်စပြုလာရပြီ။ ဒီအခြေအနေမှာ ကမ္ဘာပေါ်က ရှိသမျှလူတွေ လာတားလို့မရတော့ဘူး လူနို့တွေ ထွက်ချင် ..ထွက်ချင်လာပြီ
'အာ...အ ..Fuck.. ထွက်တော့မယ်....ညီ....အာ ရှီး'
'အဲဒါဆွဲ အပြင်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပါ အစ်ကို အာ...အ'
ပြောပြောဆိုဆို ဆွဲထုတ် သူကလည်း ကျွန်တော့်ရှေ့မှာ အသာဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်ပါတော့တယ်။ ဆွဲထုတ် အပြီးမှာ ကွမ်းသီးခေါင်းကို အသာညှစ်ထားပြီး ဖင်ကြောရှုံ့ကာ စိတ်ကို အသာအာရုံပြောင်းလိုက်ရတယ် ချက်ချင်းမပြီးအောင်ပေါ့လေ။ သူဒူးအသာထောက်ပြီး မော့ကြည့်တဲ့အနေအထား အရောက်မှာ ကျွန်တော့်လက်တွေ ဆက်လက်အလုပ်ပေးရတော့တာပေါ့။ ကျွန်တော်လုပ်သမျှကြည့်ရင်း ငံ့လင့်ရင်း သူလည်း သူ့ငပဲကို ကိုင်ကာ ဂွင်းထုပြီပေါ့တစ်ခါ။
ဖြူပျစ်ပျစ် အရည်တွေများစွာ သူ့ရင်ဘတ်ပေါ် သင်္ကြန်အမြှောက်လို တစစ်စစ် ပန်းထုတ်ပစ်တာ အားရကျေနပ်မှုအပြည့်။ မရှေ့မနှောင်း သိပ်မကြာပါဘူးဆို မိနစ် အနည်းငယ်အတွင်းမှာ သူငယ်ချင်းလေးခမျာလည်း ကိုယ်ခန္ဓာတုန်ယင်လာကာ ကျွန်တော့်ခြေဖမိုးပေါ် နွေးကနဲ နွေးကနဲ။
ခဏအကြာမှာတော့ နားနေခန်းထဲက ပစ္စည်း ပစ္စယတွေ နေရာတကျဖြစ်အောင် အသာထားကြရင်း သန့်ရှင်းရေးအတွက် ရေချိုးခန်း ၀င်သန့်စင်ကြကာ အ၀တ်အစားလှဲလှယ်ကြပါတယ်ပေါ့။
'ကျွန်တော့်အစ်ကို့ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဆိုင်ထဲ စိတ်တိုင်းကြလှည့်ကြည့်ခွင့်ပေးလို့
တော်တော်ပြည့်စုံ သားနားတဲ့ ဖက်ရှင်ဆိုင်လေးပါပဲ။ ဒါကျွန်တော့်လိပ်စာကဒ်၊ '
အိုးမိုင့်....သူဟာ နာမည်ရစ အဆိုတော်တစ်ယောက်ပါလား။ ထင်မထားမိဘူး ဒီလိုမျိုးပတ်သက်ရမယ်လို့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကောင်းပါတယ်လေ။
ကျွန်တော်လည်း ခေါင်းတစ်ချက်ဆတ်ပြလိုက်ရင်း 'အစ်ကို့အဖေကပြောဘူးတယ် customer တွေ ဘာလိုသလဲဆိုတာကို ပေးနိုင်အောင်လုပ်ပါ။ ဒါဆို သူတို့တွေ မကြာခင်ပြန်ရောက်လာမှာပဲ' တဲ့။
စကားမစပ် သူ့နာမည်က နှစ်လုံးတည်း...။
(ဟိုအရင်က Eng Dialogue တွေကြားညှပ်ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ သည်းခံ ဖတ်ပေးလို့ ကျေးဇူးပါ)
Posted by Alex Aung at 9:42 AM No comments:
WE need for help!!
WE need for help
Arthur Angé is missing
He'safrench Backpacker and cyclist - 30 years old,6feet tall, brown eyes, chestnut-red hair
Research in BANGLADESH - MAYANMAR – MALAYSIA
maybe also : CAMBODIA, LAOS, Thailand, Vietnam
Without news from Arthur Angé since 26th January, last contact from DHAKA Bangladesh, he was planning to joinafriend in Malaysia through Myanmar or by boat from Chattagong , but he didn’t arrived.
He started his travel3years ago from the south of France where he originated, foracomplete world tour by land, walking and biking, Arthur isavery discreet traveler. He is generous, always smiling and never asked anything. But today HE NEEDS OUR HELP.
Maybe he didn’t find any boat for Malaysia and he tried to cross the Mayanmar illegally ? We imagine he’s in jail or suffering somewhere... we don't know where he is and local authorities are not very participating. Only our mobilization can highlight it's case and help his family in their search.
He renewed his passport recently and we are waiting for the French ministry to give us his number.
We are deeply worry, can you help us, maybe Somebody met him ?
Sharing massively, messages could reach somebody who met him recently and help orientate the search.
If you have any info, please contact by mail his family: arthurangemissing@gmail.com or phone: + 33 650 86 25 76 or French Foreign Affairs at 0033-1 53 59 11 00
If it's possible to share, to print and display thanks thanks thanks
Posted by Alex Aung at 10:26 AM No comments:
လိင်အင်္ဂါမှာ ဒီလိုထူးဆန်းတဲ့ လက္ခဏာတွေတွေ့ပြီဆိုရင်
(၁) ဝှေးစေ့မှာ နာကျင်မှုမရှိသည့် အဖုအပိမ့်တွေ့လျှင်
NHS ရဲ့ အဆိုအရတော့ ဒီလက္ခဏာဟာ ဝှေးစေ့ကင်ဆာရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အဖု့အပိမ့်ဟာ တစ်ခုတည်းဖြစ်စေ၊ နှစ်ခုသုံးခုမက ဖြစ်စေ ကင်ဆာသာဆိုလျှင် နာကျင်မှု မရှိပါဘူး။ လက်နဲ့စမ်းကြည့်ရင် မာနေတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု စမ်းလို့တွေ့ရင် အခုပဲ ဆရာဝန်နဲ့ ပြသတိုင်ပင်ရမယ့် အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။
(၂) ပုံမှန်ထက် ကွေးခြင်းညွှတ်ခြင်း ဖြစ်လာလျှင်
လိင်အင်္ဂါထောင်မက်တဲ့အခါ မိမိရဲ့မျိုးပွားအင်္ဂါဟာ သာမန်နဲ့မတူဘဲ အခြားဘက်သို့သော်လည်ကောင်း၊ လက်ရှိ အနေအထားထက် သိသိသာသာကွေးကောက်ခြင်း ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လည်း ဆရာဝန်နဲ့ အမြန်ဆုံးတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေမှာ အရေပြားကို လက်နဲ့စမ်းကြည့်တဲ့အခါ သာမန်ထက် မာနေတာကိုလည်း တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေဟာ လိင်အင်္ဂါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Peyronie ရောဂါလက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။
လိင်အင်္ဂါ၊ ဝှေးစေ စသည်တို့ကို လက်နဲ့စမ်းလိုက်တာနဲ့ စမ်းတဲ့နေရာတိုင်း နာခြင်း၊ ထုံခြင်း၊ ကျဉ်ခြင်းများ ခံစားနေရပါကလည်း မပေါ့ဆသင့်ပါ။ ဒီလို ရုတ်တရက် မူမမှန်တဲ့နာကျင်မှုတွေကို သိရှိခံစားရခြင်းဟာ ဆီးကြိတ်၊ သို့မဟုတ် ဆီးကြိတ် ကင်ဆာနဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။
(၄) ဆီးသွားရာမှာ နာကျင်ခြင်း
ဆီးသွားရမှာ နာကျင်ခြင်း၊ မခံရပ်နိုင်အောင် နာကျဉ်ခြင်းများ ဖြစ်ပါကလည်း ဆီးကြိတ်၊ ဆီးကျောက်နဲ့ ဆက်စပ်နေတယ်လို့ ယူဆလို့ရပါတယ်။ တစ်ခါတရံမှာလည်း ဘက်တီးရီးယားတွေကြောင့် ဆီးလမ်းကြောင်း ယောင်ရမ်းခြင်းဖြစ်ပြီး ဆီးကြောပိတ်တာမျိုးလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် ဆီးကြိတ်ယောင်ခြင်း၊ ဆီးကျောက်ပမာဏ ကြီးထွားလာခြင်းတွေနဲ့ ဆက်စပ်နေပါသည်။
(၅) လိင်အင်္ဂါအရေပြားထိပ်ပိုင်း တင်းကြပ်နေတယ်လို့ ခံစားရရင်
နေရင်းထိုင်ရင်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စမ်းသပ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် မိမိရဲ့ လိင်အင်္ဂါထိပ်ပိုင်း တင်းကြပ်နေတယ်၊ သက်တောင့်သက်သာ မရှိဘူးလို့ ယူဆရတဲ့အနေအထားဟာ Lichen Sclerosus လို့ခေါ်တဲ့ ရောဂါနဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ဒါဟာ ဟိုမုန်းမညီမျှခြင်းရဲ့ သက်ရောက်မှု ဖြစ်တတ်ပြီး၊ ကင်ဆာရောဂါနဲ့လည်း အဆက်အစပ် ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
အတွင်းခံဘောင်းဘီနှင့် ကျန်းမာရေး…! (ကျန်းမာရေးအတွက် မပေါ့ဆသင့်ပါ)
ကျန်းမာရေးဟုဆိုရာတွင် တကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးသည်အလွန်ပင် အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေပေသည်။ ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်ရန် အတွင်းခံအ၀တ်အစားကို မကြာခဏ လဲလှယ်ဝတ်ဆင်သင့်ပါသည်။
အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးမျိုးပွားအင်္ဂါတို့သည် ရောဂါပိုးကူးစက်မှုနှုန်းကာကွယ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ လိင်အင်္ဂါမှ အရည်များအမြဲတစေစိမ့်ထွက်လေ့ရှိပြီး ၎င်းအရည်တို့သည် အောက်ခံဘောင်းဘီကို စိုစွတ်စေပါသည်။ ၎င်းသည်ပင်အတွင်းခံဘောင်းဘီကို ညစ်ပတ်စေသော အဓိအကြောင်း
အရင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ အတွင်းခံကိုမကြာခဏ မလဲလှယ်ဖြစ်ပါက ဘက်တီးရီးယားပိုးများ စုပုံလာနိုင်ပြီး ရောဂါ အလွယ်တကူဖြစ်ပွားနိုင်စေပါသည်။
အတွင်းခံအ၀တ်အစားကို မကြာခဏလဲလှယ်သင့်သော အဓိကအကြောင်းအရင်းဖြစ်ပြီး အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း တကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းမှုသည် ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရောဂါပိုးများ မ၀င်ရောက်စေရန် ကာကွယ်နိုင်သောနည်းလမ်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းနေရာများတွင် ကျန်းမာရေးပြဿနာများဖြစ်ပွားခြင်းကို မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှ မလိုလားသည်နှင့်အညီ သန့်ရှင်းရေးကိုအထူးဂရုစိုက်သင့်သည်။
မိမိတို့၏ခန္ဓာကိုယ်သည် ဘက်တီးရီးယားပိုးများကို ဖယ်ရှားနိုင်သော်ငြားလည်း အတွင်းခံကို
မကြာခဏ မလဲလှယ်ပါက ၎င်းအတွင်းခံအတွင်း ပိုးမွှားများစုပုံလာကာ မျိုးပွားအင်္ဂါအတွင်းသို့ အလွယ်တကူဝင်ရောက်နိုင်ပါသည်။ ရောဂါပိုးမြောက်များစွာရှိ၍ အမျိုးသမီးများတွင် ပိုမိုအဖြစ်များလေ့ရှိသည်။
လူ၏ခန္ဓာကိုယ်သည် အမြဲတစေချွေးများဖြင့် စိုစွတ်လေ့ရှိခြင်းကြောင့် ၎င်းခန္ဓာကိုယ်အစိတ်
အပိုင်းတို့တွင် လေ၀င်လေထွက်မကောင်းပါ။ ဘက်တီးရီးယားပိုးများ ပေါက်ပွားလာနိုင်ပါသည်။ ပိုးမွှားများသည် အနံ့ဆိုးကိုဖြစ်စေနိုင်ခြင်းကြောင့် အတွင်းခံကို လဲလှယ်ရုံသာမက ရေချိုးခြင်းကိုပါပြုလုပ်သင့်ပါသည်။
အတွင်းခံ၌ မစင်အညစ်အကြေးများ ပေကျံနေခြင်းသည်လည်း အခြားဖြစ်လေ့ဖြစ်ရှိသော အကြောင်းအရင်းတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။
အတွင်းခံများကို ပုံမှန်မလဲလှယ်ဘဲ ၀တ်ဆင်မည်ဆိုပါက ချွေးများ၊ အညစ်အကြေးများကြောင့် အရေပြားယားယံခြင်းကိုလည်း ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါသည်။
♦ အတွင်းခံအ၀တ်အစားကို တစ်နေ့လျှင် ဘယ်နှစ်ကြိမ်လဲလှယ်သင့်ပါသနည်း
ပုံမှန်အားဖြင့် တစ်နေ့လျှင် တစ်ခါလဲလှယ်သင့်ပြီး ချွေးထွက်အလွန်များပါက ထို့ထက်ပို၍ လဲလှယ်သင့်ပါသည်။ ရေချိုးပြီးသည့်အခါတိုင်း ၀တ်ဆင်ပြီးသည့်အတွင်းခံကို ပြန်လည်၍
မ၀တ်ဆင်သင့်ပါ။ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ရောဂါဖြစ်နိုင်ချေပိုမိုများပြားသောကြောင့် ပိုမို၍ဂရုစိုက်သင့်ပါသည်။
Posted by Alex Aung at 8:50 AM No comments:
ကျွန်တော်တို့ရွာလေးဟာ အခြေချနေထိုင်သူပေါင်း ၁၂၀လောက်ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့မိသားစုအစဉ်အဆက်ဟာ ဒီတောင်ကြား လေးထဲမှာနေထိုင်လာကြတာ နှစ်ပေါင်းတစ်ရာလောက်ရှိပြီလေ။ ကျွန်တော် သဘောကျတယ် ကျွန်တော့် ရွာကလေးကိုလေ။ နေထိုင် နေကြတဲ့ ရွာသူရွာသားတွေကော ရွာကလေးကိုယ်တိုင်တည်ရှိနေပုံကိုရော နှစ်သက်တယ်။ ဘယ်အနေအထား ဘယ်နေရာမှာ ရှိခဲ့ဖူး တယ်ဆိုတာ တိတိကျကျ မသိစေနိုင်တော့တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ ဖြစ်မလာနိုင် လောက်ဘူးလို့ မျှော်လင့်ထားတဲ့အရာတွေ…..တစ်နေ့ တော့ ဖြစ်လာခဲ့တယ်….ဟုတ်တယ် ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီနေ့က ခါတိုင်းနေ့ရက်တွေလိုပါပဲ။ ကျွန်တော့်မိသားစုနဲ့အတူ စားပွဲဝိုင်းတစ်ခုမှာ ညစာအတူထိုင်စားနေကြပါတယ်။ အချိန်က နေ၀င်ရီတရောအချိန်လေးပေါ့နော်။ ရုတ်တရက်ဆိုသလို ကျွန်တော့်အဖေရဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် အော်ဟစ်သံက စီကနဲထိုး ဖောက်ထွက်လာတယ်။ ‘သူ လာပြန်ပြီ……သူ နောက်တကြိမ်လာပြန်ပြီဟေ့’ ကျွန်တော့်အဖေက အဲ့ဒီအော်သံကိုလည်းကြားရော ခပ်မြန်မြန်ပဲ မတ်တပ်ထရပ်လိုက်ကာ သူ့လေးနဲ့ မြှားတံဘူးကိုဆွဲယူရင်း ခပ်သွက်သွက် ပြေးထွက်သွားတယ်ဗျ။ အမေက ကျွန်တော်ရယ် ကျွန်တော့် ညီမလေးနှစ်ယောက်ရယ်ကို ခေါ်ပြီး အပေါ်ထပ်လှေကား အတိုင်း ခပ်သွက်သွက်တက်သွားကြပြီး အဖေတို့မပြန်လာမချင်း ပုန်းနေဖို့နေရာကိုပို့ပေးရော။ ကျွန်တော်က အဖေတို့ နောက်ကိုလိုက်သွားချင်ကြောင်းအမေ့ကိုပြောတော့ ကိုင်နေကြ အဖေ့လက်ဆောင် ဓားမြှောင်ရှည်ကိုယူပေးလို့ လှမ်းယူ လိုက်ပြီး အိမ်ထဲကနေ ပြေးထွက်သွားလိုက်ပါတယ်။
ဒီနေ့ဟာ တော်တော်လှတဲ့နေ့တစ်နေ့ပါပဲ နှင်းတွေထူထူထဲထဲကျ ထားခဲ့တော့ ဖွေးဖွေးလှုပ်နေတဲ့ နှင်းခဲဖြူတွေပေါ် နေရောင်က အလင်းပြန်နေတာကြောင့် တောက်ပနေရော။ ကျွန်တော် ခဏတော့ ရပ်လိုက်မိတယ်။ အရာအားလုံး မြင်ကွင်းအစုံဟာ လှပလွန်းနေ တော့တာကိုး။ ရုတ်တရက်ဆိုသလို ဘာကြောင့် အိမ်ကနေ ပြေးထွက်ခဲ့သလဲဆိုတာ ပြန်သတိရမိပါရဲ့။ ဟော…..ရွာအစွန်ဖျားစီက အော်သံတစ်ချက်ကြားလိုက်ရတယ်။ ကျွန်တော် အသံကြားရာဘက်စီကို ပြေးထွက်လှမ်းလိုက်ပါပြီ။ နောက်တော့ သူ့ကိုတွေ့ရတာပါပဲ။ Garfereas ကျွန်တော်တို့ရွာကို နှစ်ပေါင်းများစွာ ပြစ်ဒဏ်တစ်ခုခတ်သလို အနှောင့်အယှက်ပေးနေတဲ့ နဂါးကြီးဗျ။ ဖြန့် ထားတဲ့ သူ့အတောင်ပံတွေဟာ တစ်ရွာလုံးကို လွှမ်းအုပ်ထားသလားထင်ရတယ် နေရောင်တွေကိုတောင် မမြင်ရတော့ဘူး နေလုံးကြီးပျောက်ကွယ်သွားသယောင်ဖြစ်ကရော။
သူ့အရပ်က မြေပြင်ကနေစတိုင်းရင် မီတာ ၃၀လောက်တောင်ရှိမလားပဲ တရှူးရှူးနဲ့ သူ့နှာဝကထွက်နေတဲ့ မီးတောက်များ ကြောင့် သူ့အောက်နားက နှင်းခဲများပေါ်မေးတင်နေတဲ့ အိမ်အချို့ဟာ အရှိန်ငြီးငြီး တောက်လောင်နေပါတယ်။ သူ….သူ ကျွန်တော့်ဆီ တည့်တည့်ကြီး ပျံသန်းလာတယ်….. တောင်ပံခတ်ခြင်း ကနေ လေလှိုင်းတွေတောင် ခံစားမိရသလိုပဲဗျာ။ တိုးတိုက်မှုကြောင့် အိမ်အချို့တောင်ပဲ့ရွဲ့ကုန်သလို ကျွန်တော် ခပ်တည်တည် မတ်တပ်ရပ်နေရာကနေ နောက်ပြန်လှည့် ပြေးမိပါတော့တယ်။ ကြောက်ရွံ့မှုကြောင့် ခြေလှမ်းတွေက ယိုင်တိုင်တိုင်….နောက်နားစီက အိမ်တွေပြိုလဲသံကိုလည်းကြား ရတာကြောင့် ချွေးစေးတွေ ပိုပြန်…. ပြန်လှည့်ကြည့်မိပြန်တော့ တဖြည်းဖြည်း နီးကပ်လာတဲ့ သူ့ပုံက ပိုပိုကြီးလာသလားပဲ ….အား။
မိနစ်တွေဖြတ်သန်းပြီးနောက် နဂါးကြီးဟာ အဝေးကိုပျံသန်းထွက်ခွာသွားပါတယ်။ အနည်းဆုံး ဆယ်မိနစ်ကျော်ကျော် လောက်မှာ ရွာနဲ့ဝေးရာကိုရောက်ရှိသွားပါပြီ။ ကျွန်တော် တဆတ်ဆတ်တုန်နေတဲ့ ခြေထောက်တွေကို အားပြုရင်းထရပ် လိုက်တယ်။ နဂါးကြီး ကျွန်တော့်ဆီ တည့်တိုးလိုလိုပျံသန်းလာချိန်မှာ လွတ်ကျခဲ့တဲ့ ခပ်လှမ်းလှမ်းက ကျွန်တော့်ဓားမြှောင် ရှည်ကို ကောက်ယူလိုက်ချိန်မှာတာ့ အကြီးအကျယ် ရှော့ခ်ဖြစ်သွားရပါတယ်။ တစ်ရွာလုံးလိုလို အကုန်ပျက်စီးနေကြပါပြီ။ အိမ်အချို့ဟာ မီးတောက်တစ်ချို့နှင့် လင်းလက်နေဆဲ၊ အိမ်တံစက်မြိတ်အချို့ပြိုလဲကျနေဆဲ….။ အလန့်တကြား အော်ဟစ် သံမကြားရမှီက ရှိခဲ့သော တစ်ဖက်သော ရွာအစွန်ကို အစတော့ ခပ်နှေးနှေး၊ တုန်ယိုင်နေသော ခြေလှမ်းများဖြင့်ပေါ့…. မကြာခင်မှာပဲ ဒုန်းဆိုင်းပြေးသွားမိပါတော့တယ်။ နောက်ဆုံး ကျွန်တော်တို့ရွာရဲ့ အဆုံးသတ် တောခင်တန်းလေးရှိရာကို ရောက်မှပဲ အပြေးရပ်ဖြစ်တယ်လေ။
ဟင်….ကျွန်တော် ကျွန်တော် သိလိုက်ရပြီ နဂါးကြီး ရွာအလယ်ကနေ အဝေးဆီကို ဘာကြောင့်ပျံသန်းထွက်ခွာ သွားခဲ့လဲ ဆိုတာကိုလေ။ သူ…သူ့အလုပ် ပြီးဆုံး ပြီးဆုံးသွားပြီကိုး။ အသက်ကင်းမဲ့နေသော ယောက်ျားများ၊ မိန်းမများရဲ့ လဲပြိုနေ သောမြင်ကွင်းကို အသည်းထိတ်ဖွယ် ကျွန်တော်မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ ရွာထဲမှာရှိသမျှ အရွယ်ရောက် ယောက်ျား မိန်းမတွေ အကုန်လုံးဟာ ပြိုပျက်နေသော ပတ်ဝန်းကျင်အနှံ့မှာ ကပိုကယိုအကုန် လဲပြိုနေကြတယ်ပေါ့။ အသတ်ခံရသောကိစ္စဆိုတာ တကယ်ဆိုးရွားသော နည်းလမ်းတစ်ခုပဲ လောကကြီးမှာလေ။ ခပ်တင်းတင်းဆုပ်ကိုင်ထားသော အရောင်တလက်လက်ဖြစ် နေသော ဓားမြှောင်ရှည်အား မြဲမြဲ မဆုပ်ကိုင်နိုင်တော့ဘဲ ကျွန်တော့်လက်ဖျားကနေ အောက်ကို လျောကျသွားရပါပြီ။ ပြီးတော့ ကျွန်တော် လုံးဝလှုပ်ရှားမှု မလုပ်နိုင်ခဲ့တော့ပါ။ ကျွန်တော့်မိဘ…..ဖေရော …မေရော ဘယ်နေရာမှာများလဲပြို နေပါလိမ့်။
ကျွန်တော် အလောင်းတွေကြား ဟိုသည် အပြေးအလွှားလှမ်းကာ ကျီးကန်းတောင်းမှောက် ကယောင် ချောက်ခြား ရှာဖွေ မိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူအချို့ဟာ နဂါးကြီးရဲ့ မီးတောက်များကြောင့် လောင်ကျွမ်း ထားကြတာ ရုပ်ရည်တွေက ဘယ်သူ ဘယ်ဝါဆိုတာ မသတ်မှတ်မသိရှိနိုင်တော့ပါဘူး။ အချို့က ထက်လှသော သူ့ခြေသည်းလက်သည်းတွေရဲ့ ထိုးခွဲထားခြင်း ဆူးတောင်ပါသော သူ့အမြီးကြီးနဲ့ ရိုက်ခတ်ထားခြင်း သန်မာလှသော သူ့မေးရိုးကြီးများဖြင့် ကိုက်ဖြဲ ထားခြင်းတို့ကြောင့် ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်ဖြစ်နေကြသည်ဗျာ။ မှတ်မိသိရှိနိုင်သော အလောင်းများကြားလျှောက်ကြည့်ပြန်တော့လည်း ကျွန်တော့် မိဘများကိုတွေ့အောင် မရှာဖွေနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ မြေပြင်ပေါ်က ဖွေးနေသော နှင်းခဲထုကြီးဟာ ဆွေးဆွေးနီခဲ့ပြီ။ ပြီးတော့ ကောင်ကင်ကြီးဟာလည်း အနီရောင်ကိုပြောင်းနေသလိုမြင်ရပါတယ်။ သွားပြီ ကျွန်တော့်ကမ္ဘာ တုန်ခါယိမ်းယိုင်ခဲ့ပြီပေါ့။ ကျွန်တော် ကျွန်တော် အဲ့ဒိနေရာကနေ ထွက်ခွာခဲ့တယ်…..ဒီကမ္ဘာကြီးမှာ ကျွန်တော် တစ်ယောက်တည်းပေါ့…… ဒီတောင်ကြားရွာလေးထဲမှာ တစ်ယောက်တည်း…။
အထက်ပါအဖြစ်အပျက်တွေအားလုံးဖြစ်ပျက်ခဲ့တာ အချိန်တော်တော်ကြာခဲ့ပေမဲ့ ကျွန်တော့်နှလုံးသားထဲမှာ မေ့ဖျောက် လို့မရသေးပါဘူး။ အဲဒီတုန်းက အသက်၁၀ နှစ်ဝန်းကျင်ရှိခဲ့ပြီး အခုအချိန်မှာ တစ်ယောက်တည်း နေထိုင်လာခဲ့ရတာ အသက် ၂၇နှစ်ရှိပါပြီ။ မူလူဘူတရွာရဲ့အပြင်ဘက် မိဘတွေအမွေပေးခဲ့တဲ့အိမ်ကြီးမှာ ကျွန်တော် နေထိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်မိဘတွေသေဆုံးခဲ့ပြီး နှစ်အနည်းငယ်အကြာမှာတော့ တောင်ကြားရွာ လေးထဲမှာ သရဲ မှင်စာတွေထကြွ သောင်းကြမ်းလာတာကြောင့် အခြေချနေထိုင်သူအသစ်တွေ မလာရောက်ကြ ပါဘူး။ လူသားတွေ နေထိုင်ပြုပြင်ခြင်းမရှိ တော့တာကြောင့် ရွာကြီးဟာ သုဿာန်တစ်စပြင်လိုကိုဖြစ်နေတော့ တာပါပဲ။ သရဲ မှင်စာတွေ နေ့စဉ် ကွယ်ပျောက် ကျွတ်လွတ်တယ်ဆိုဦး လျော့သွားမှန်းမသိအောင်ကိုများနေပါ သေးတယ်။ ဘာကြောင့် နဂါးကြီး ကျွန်တော့်ကို ရန်လာ မရှာတော့တာလည်း မသိဘူးဗျာ…ကျွန်တော်ရွာအပြင် မှာနေနေတာ ရှိနေတာသူသိလောက်တယ်လေ။ တောင်ကြားလမ်း လေးရဲ့အလွန်အပြင်လောကမှာ ဘာတွေ ဖြစ်နေလဲ ကျွန်တော် တကယ်မသိတော့ဘူး အဆက်ပြတ်နေတာကြာလှပါပြီ။ လူသားတွေ ဘယ်ကနေလာကြ တယ်ပြီးတော့ ဘယ်နေရာမှာနေထိုင်ကြတယ်ဆိုတာ သိလည်းမသိဘူး သူတို့နေထိုင်ရာ ဒေသတွေဆီကိုလည်း မသွားခဲ့စဖူးဘူး။ မွေးစအရွယ်ကတည်းက အရွယ်ရောက်သည်အထိ ဒီတောင်ကြားရွာကလေးမှာ နေထိုင် အသက်ရှင်ခဲ့တာပါ။ ၀ိဥာဉ်တွေ မှင်စာတွေကတော့ အရပ်ဒေသကိုစွန့်ခွာပြီး ခပ်ဝေးဝေးကို ကျွန်တော်ထွက် သွားစေချင်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့က ကျွန်တော့်ကိုကြောက်ကြတယ် သူတို့ထက်ကျွန်တော်က အများကြီး သန်မာတာ ကိုးဗျာ။ ကျွန်တော့်ကို တစ်ကြိမ် သူတို့တိုက်ခိုက်တာ အားပျော့နေတဲ့ သူတို့ဦးရေ ၅၀လောက်ကို ကျွန်တော် သတ်ပစ် လိုက်တော့ အဝေးကိုပြေးရော။
တောင်ကြားရွာကလေးမှာ တစ်ယောက်တည်းနေထိုင်ရကတည်းက အစားအစာအတွက် တိရစ္ဆာန်လေးတွေကို အမဲလိုက် ခြင်းဖြင့် ရှင်သန်ခဲ့ရသလို တစ်ခုတည်းသော တစ်ရက်သောကာလမှာ ပြည့်စုံလာမယ့် အိပ်မက်ကို အချိန်ရတိုင်းဖြည့်ဆည်း ကြည့်မိတယ်။
မကြာခဏဆိုသလိုပဲ ရွာဟောင်းနေရာလေးကို အလည်အပတ်သဘောလှည့်လည်မိတိုင်း အကြီးအကျယ် ဂယက်ရိုက်ခတ် ခဲ့သော နေ့..အဲ့ဒီနေ့လေးမှာ ဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်ဆိုတာ ပြန်ပြန်အမှတ်ရမိစေပါတယ်။ ကျွန်တော် မမေ့နိုင်ဘူး ကျွန်တော် မေ့လည်းမမေ့ချင်ခဲ့ဘူး။ အခုအချိန်အထိ အသက်ရှင်သန်နေထိုင်ရတဲ့ တစ်ခုတည်းသော အကြောင်းပြချက်က ကျွန်တော့်မိသားစုနဲ့အတူ နေထိုင်ရာရွာကလေးကို ပျက်စီးစေခဲ့တဲ့ Garfereas ကို သတ်ဖြတ်ဖို့ ကလဲ့စားချေဖို့ပဲဗျ။ ၀ိဥာဉ် မှင်စာတွေကလည်း ရွာဟောင်းလေးနဲ့ ခပ်ခွာခွာ သိပ်မနေကြပါဘူး။ ရွာဟောင်းလေးက မနှစ်မြို့စရာကောင်းပြီး ပျက်စီးနေတာဆိုတော့ နဂါးကြီးက ဂရုစိုက်မှာ မဟုတ်ဘူး လုံခြုံစိတ်ချတဲ့နေရာလို့ သူတို့ထင်ပုံပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် ကတော့ ဒီနေရာဟာ လုံခြုံစိတ်ချရ တယ်ဆိုဦး နေထိုင်ချင်စိတ်လုံးဝမရှိပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကွဲပြားခြားနားသော ခံစားမှုတွေကို တစ်ပြိုင်တည်းလိုလို ခံစားရစေတတ်လွန်းလို့ပါ။ အမှတ်ရစရာကောင်းသော အဖြစ်အပျက်လေးတွေ၊ ဆိုးရွား ပြီး မေ့ပစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေ၊ အမျက်ဒေါသ…..ဆတ်ဆတ်ခါအောင် နာကျင် ၀မ်းနည်းရမှုတွေ အို….ပြောရရင်အများ ကြီးပါပဲ။
ရွာကြီးက တကယ်တန်းတော့ ကျွန်တော့်ကို အတိတ်ကာလတစ်ခုနဲ့အမြဲဆက်စပ်ပေးသလိုဖြစ်နေတာကြောင့် ခြောက်ခြား တဲ့စိတ်ကိုလည်း ခံစားရစေပြန်ပါတယ်။ ရှိသေးတယ်….ရင်ဘတ်ထဲက တဆစ်ဆစ်ဖြစ်အောင်ခံစား ရစေတဲ့ အရာဝတ္ထု ပစ္စည်းတစ်ခု။ ထွားကြိုင်းလာတဲ့ ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့စာရင် သေးငယ်သွားတယ်လို့ထင် ရပေမယ့် လက်ဖျံနားမှ ကပ်ပြီးကိုင်ကာ ဘယ်ညာပြောင်းကစားရင်း ရန်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်လို့ရသေးတဲ့ အဖေ ပေးခဲ့သော ဓားမြှောင်ရှည် တစ်ချောင်း။ ဒီဓားမြှောင်က နဂါးကြီးနဲ့ပက်ပင်းတွေ့စဉ်က အသုံးမပြုလိုက်ရပေ မယ့်မြောက်များစွာသော ၀ိဥာဉ်တွေ မှင်စာတွေကို ထွက်ပြေးနိုင်စေခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်အသက် မသေခင်ထိတော့ နဂါးကြီးကိုသတ်တဲ့နေရာမှာ အသုံးချနိုင်ဦးမှာပါလေ။
ဒါပါပဲ ဒီနေ့အထိ ကျွန်တော်ဘယ်လိုအသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာ။ ကျွန်တော့်မိသားစု ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းတွေ အသတ်ခံခဲ့ရသောနေရာဖြစ်တဲ့ တောင်ကြားရွာလေးမှာ အသက်ရှင်သန်နေထိုင်ခဲ့ခြင်း။ လူအများစု အသတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ကွင်းပြင်နေရာကို ကောင်းကောင်းမြင်နိုင်တဲ့ တောင်စောင်းတစ်ခုရှိ အိမ် တစ်အိမ်ရဲ့ ရှေ့သစ်မြစ်ဆုံပေါ် ကျွန်တော်အမြဲ ထိုင်ပြီး ငေးနေလေ့ရှိတယ်။ အခုတော့ နေလုံးကြီးလဲ အနောက်ဂေါ်ယာကျွန်းဆီ ယွန်းပြီဆိုတော့ အိမ်ပြန်ချိန်တန်ပြီဖြစ် ကြောင်း အချက်ပြ မှောင်ရီဖြိုးဖြ မြင်ကွင်းတွေက သတိပေးလာပြီ။ ထိုင်နေရာကနေ မတ်တပ်အထ နောက်ပြန်လှည့် လိုက်ချိန် မြင်လိုက်ရတဲ့ မြင်ကွင်းကြောင့် တကယ် တကယ့်ကို ရှော့ခ်ဖြစ်သွားရပြန်ပါတယ်။ ၀ိဥာဉ် မှင်စာတွေထဲက တိုက်ရဲခိုက်ရဲတဲ့ သူတွေ အတော်များများ ကျွန်တော့်ကိုဝန်းရံပြီးရပ်နေကြတာကိုတွေ့လိုက်ရလို့ပါ။ ဘယ်တော့မှ ၀င်လာ လေ့မရှိတဲ့ ရွာတွင်းဧရိယာတစ်ဝိုက်ကို သူတို့ဘယ်လိုများ ချဉ်းကပ်လာကြပါလိမ့်။ ဘာမှမလုပ်ဘဲ ငြိမ်နေတဲ့ ကျွန်တော် ရှိရာဆီ သူတို့ကိုင်ဆွဲထားတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ တိုက်ခိုက်ဖို့ပြေးချလာကြပါတယ်။ ဒီတော့ ကျွန်တော့်ခါးမှာ အသင့်ချိတ် ထားတဲ့ ဓားမြှောင်ရှည်ကိုဆွဲထုတ်ကာကွယ်ရင်း ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ပစ်တာပေါ့။ ကျွန်တော့်ကို သူတို့ကစတင်အလစ် တိုက်ခိုက်ရင် အနိုင်ရမယ်လို့ သူတို့မျှော်လင့်ထားပေမယ့် မကြာခင်မှာပဲ ကျွန်တော် အသာစီးရလာပါတယ်။ ညာဘက်ခြမ်း ကနေ အဆက်မပြတ်တိုက်ခိုက်လာကြပေမယ့် အဖေပေးထား တဲ့ လက်ဆောင်က ကျွန်တော့်ကို အကာအကွယ်ပေးဆဲ။ တိုက်ပွဲက မကြာခင်မှာပဲ အဖြေပေါ်လာကာ မှင်စာထဲက တစ်ကောင်က ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားပါရော။ လဲကျနေတဲ့ ၀ိဥာဉ် ကောင်ရဲ့ လှံတံကိုကောက်ဆွဲပြီး ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့ တစ်ကောင်ကိုပစ်ထည့်လိုက်တာ ကျောကော့ပြီး ပစ်လဲကျသွား ပါတယ်။
ကျွန်တော့်ဝန်းကျင်က နှင်းခဲပြင်တွေပေါ်ဝယ် လဲကျနေတဲ့ ကျွန်တော့်ရန်သူတွေရဲ့ သွေးအမဲရောင်တွေကြောင့် မဲနက်နေ ပါတယ်။ ဟိုသည်ကြည့်နေရင်းမှာ အချိန်ဘယ်လောက်ရှိပြီဆိုတာ သတိပြန်ကပ်မိတာကြောင့် အိမ်ပြန်ဖို့ နေရာကရွေ့ ရရော။ ဒီ မှင်စာတွေ သူတို့နေထိုင်ရာဝန်းကျင်ကနေ ကျွန်တော့်အ၀န်းအ၀ိုင်းထဲ သူတို့ဖြတ်လာကြ ၀င်လာကြပြီ မကြာခင် ကျွန်တော် နေရာ အိမ်နဲ့ ရွာပတ်ဝန်းကျင်ကို သူတို့ပြေးလွှားကြတော့မယ်။ ကျွန်တော် အိမ်ကိုလည်းရောက်ရော အိပ်ယာ ထဲတန်းဝင်ကာ အိပ်ပျော်ဖို့ကြိုးစားလိုက်ပါတယ်။
အဲ့ဒီည ကျွန်တော့်ကို ကျွန်တော် ဟာလာဟင်းလင်း ကွင်းပြင်ကြီးထဲမှာမြင်ရတယ်။ မြေပြင်ကြီးက နှင်းတွေဖုံးလွှမ်းနေ တာကြောင့် အဖြူရောင်ဖြစ်နေပြီး ကောင်းကင်ကြီးကတော့ အပြာရောင်သန်းလို့။ ကျွန်တော့်ရဲ့ နောက်နားစီမှာတော့ လူတစ်စုရပ်နေကြတယ်။ ခန့်မှန်းခြေ လူဦးရေ တစ်ရာနီးပါးလောက်ရှိမယ်။ သူတို့ရှိရာဘက်ကို ကျွန်တော်လှည့်လိုက်ပြီး ဒီနေရာက ဘယ်နေရာလဲမေးဖို့ခြေလှမ်းလိုက်ချိန်မှာတော့ ကောင်းကင်ကြီးဟာ ရုတ်တရက် အနီရောင်ပြောင်းသွားရင်း နေလုံးကြီးကလည်း မှောင်ကျသွားခဲ့ပါတယ်။ လူတွေကြည့်ရတာ အသည်းအသန်ကြောက်ရွံ့နေကြကာ ဘာဖြစ်နေတာ လည်း ဘာကြောင့်လဲ ကျီးကျန်းတောင်းမှောက်ရှာနေကြရော။ မကြာခင်မှာပဲ မြင်လို့မရတဲ့ အားအင်တစ်ခုဟာ သူတို့ကို လေနီကြမ်းနဲ့ ဆွဲမွှေ့သည့်အလား လွင့်စင်ကုန်ပြီး နာကျင်မှုကြောင့် အော်ဟစ်သံတွေကြားလိုက်ရကာ သူတို့အသတ်ခံ လိုက် ရပါတယ်။ မကြာခင်မှာပဲ လူတွေအားလုံးမြေပြင်ပေါ် လဲကျနေကာ သူတို့ကိုယ်ပေါ်ကထွက်သောသွေးတွေဟာလဲ ဆွေးဆွေးနီနေသည့်အပြင် နောက်ဆုံးထွက်သက်ဝင်သက်ကိုရှူရှိုက်နေကြရဲ့။ ကျွန်တော် တစ်ရွေးသားမှ မရွှေ့မလှုပ်ရှားမိ။ ကျွန်တော် ဘယ်တုန်းကမှ ဒီလိုမြင်ကွင်းမျိုးကို မမြင်ဘူးခဲ့ ဒါမှမဟုတ် မြင်ခဲ့ဖူးသလား မသိတော့။ အာ....ရုတ်တရက် လွန်ခဲ့သော ၂၇နှစ်က ဒီလိုမြင်ကွင်းမျိုး ကျွန်တော်မြင်ခဲ့ရတာကို သတိရပါတယ်။
‘မင်း……သူတို့ကိုသွားပြီး မကူညီတော့ဘူးလား?’ ကျွန်တော့်နောက်ပါးဆီက အသံတစ်သံကိုကြားလိုက်ရတယ်။ ကျွန်တော် နောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ တစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမှ မမြင်မိ။ ‘မင်း သူတို့သွေးထွက်လွန်ပြီးသေမှာကို စောင့်ကြည့် နေဦး မှာလားကွ’ ခဏနေကအသံကို ကျွန်တော့်အထက်ဖက်ဆီကကြားရပြန်တယ်။ အပေါ်ကို မော့ကြည့်လိုက်တော့ ကျွန်တော့်ကို ကျွန်တော့်ကို ဘယ်သူစကားပြောနေသလဲဆိုတာ မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ Garfereas သူပဲ…သူ။ ကျွန်တော့် ကိုကြည့်ပြီး သူရယ်မော နေပြီ။
‘ကဲ….ငါ့ကိုသတ်မယ့်လူဆိုလို့ မင်းတစ်ယောက်ပဲရှိတော့တာပေါ့ ဟုတ်လား’ သူက ရယ်ဟဟနဲ့ပြောတယ်။ ‘မင်း ငါ့ကို စပြီးတိုက်ခိုက်တာနဲ့ သေသွားနိုင်တယ်နော်’ ကျွန်တော် ခပ်မတ်မတ်ထရပ်ပစ်လိုက်တယ်။ အဲ့ဒီအခိုက်အတန့်လေးမှာပဲ Garfereas က ရှည်လျားချွန်ထက်လှသော အမှီးကြီးကို လွှဲထည့်ပြီး ကျွန်တော့်ရင်ဝရှိရာကို ဦးတည်တိုက်ခိုက်ပါရဲ့။
‘အား……’ ချွေးစေးတွေပြန်ပြီး ညသန်းခေါင်ချိန်မှာ နိုးထလာရပါတယ်။ အိပ်မက် အိပ်မက်တစ်ခုမျှသာဖြစ်မှာ။ ကျွန်တော့် အနေနဲ့ တကယ်ကြီး ဖြစ်ပျက်ခဲ့သလို မောပန်းခံစားနေရသလို နဂါးအမြီးနဲ့ ထိခိုက်မိတဲ့နေရာကလည်း တကယ်ကို နာကျင်မိပါတယ်။ ဒါဟာ သာမန် အိပ်မက်ဆိုးတစ်ခုမဟုတ်ဘူး။ တစ်ခုခုတော့ ကျွန်တော်လုပ်ရမယ်။ အိပ်ရာပေါ်က ထရပ်လိုက်ကာ ပြူတင်းပေါက် ဆီသွား အပြင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ မကြာခင် မိုးသောက်တော့မယ့် ရောင်နီသန်း နေပြီဆိုတာမြင်ရပါတယ်။ ဓားမြှောင်တိုကို ခါးမှာချိတ်၊ ဓားရှည်ကောင်းကောင်းကို ကျောမှာလွယ်၊ လေးနဲ့မြှားဘူးကိုလည်း ပခုံးတစ်ဖက်မှာချိတ်၊ လှံတံ တစ်ချောင်းကိုဆွဲကိုင်ကာ မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းအလွန် တောင်ကုန်းတစ်ခုကို မျှော်ကြည့်လိုက် တယ်။ Garfereas နေထိုင်ရာ တောင်ကုန်းပေါ့။ ဆုံးဖြတ်ပြီးရင် နောက်ပြန်လှည့်ဖို့အကြောင်း ကျွန်တော့်မှာမရှိဘူး။ ကျွန်တော် စလှမ်းပြီ။ မှင်စာတွေ ကျွန်တော့်ကို မတိုက်ခိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ သုံးရက်ခရီးလောက်နှင်ရမယ်။ တောတောင် တစ်ဝိုက် သားကောင်တွေရှိနေ တာကြောင့် ကျွန်တော့်အတွက် စားနပ်ရိက္ခာတွေ မယူသွားတော့ဘူး။
အဦးဆုံးနေရက်ကတော့ ကောင်းကောင်းမွန်ပဲဖြတ်သန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဘယ် သရဲတစ္ဆေမှင်စာ တစ်ကောင်တလေမှ မတွေ့ ခဲ့ရပါဘူး။ တောင်ကုန်းတစ်ခုကို ခပ်ဖြေးဖြေးတက်လှန်းလို့ ချိုးအကွေ့မှာ ကျောက်ဂူတစ်ခုတွေ့တော့ ခဏရပ်ပြီး ဟိုသည်ကြည့်လိုက်တာ တော်တော်လှပတဲ့ ရှူခင်းကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ ဂူထဲမှာ အန္တရာယ်ရှိမရှိ စစ်ဆေးပြီးနောက် အိပ်ပျော်သွားခဲ့လိုက်တာ နောက်တစ်နေ့မနက် နိုးထလာချိန်မှာတော့ ဂူထဲမှာ ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်မဟုတ်ဘူးဆို တာ သတိပြုမိပါရဲ့။ ဂူအ၀င်ဝနားမှာ စစ်သည်ပုံစံ သရဲသုံးကောင်ဟာ မတ်တပ် မတ်တပ်နဲ့ ဖွေးကနဲဖွေးကနဲ နှင်းမုန်တိုင်း ကျနေသော ဂူအပြင်ဘက်ကိုစူးစမ်းကြည့်နေကြပါတယ်။ ကျွန်တော် အသာအယာလေးထရပ်လိုက်ကာ ဓားရှည်ကို အသာ အယာ အသင့်အနေအထားကိုင်တွယ်ပြီး သူတို့ဆီကိုချဉ်းကပ်သွားလိုက်ရော။ ပထမဆုံး သရဲတစ်ကောင်ကို ခုတ်ပိုင်းဖို့ ပြင်လိုက်တဲ့ခဏ အခြားသော သရဲတစ်ကောင်က သတိပြုမိသွားပြီး အခြားသူတွေကို သတိပေးအော်ဟစ်တယ်ဗျ။ ခုတ်မိစဲစဲ သရဲက ဘေးကိုခုန်ထွက်လိုက်ကာ ကျွန်တော့်ကို ၀ိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်။ တိုက်ပွဲက တိုတောင်းပေမယ့် ကြမ်းတမ်းလှပါရဲ့။ သရဲနှစ်ကောင်ဟာ ကျွန်တော့်ဓားချက်အောက်မှာ လဲပြိုကျကုန်တာ မြန်ပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်မှု ဓားရေး အစွမ်းတို့ကြောင့် ကိုယ့်ဖာသာ ဒဏ်ရာမရအောင် ကာကွယ်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ နောက်ဆုံးတစ်ကောင်ကတော့ ဂူအပြင်ကို ကမူးရူးထိုးထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒဏ်ရာရလို့မဖြစ်ပါဘူး Garfereas နဲ့မတွေ့ မတိုက်ခိုက်သေးခင် ကျွန်တော် ဒဏ်ရာ ကြောင့် အားနည်းသွားလို့မဖြစ်ဘူး။
ကျွန်တော်သယ်ဆောင်လာသောပစ္စည်းတွေ လက်နက်တွေအကုန် ကောက်သိမ်းလိုက်ကာ အပြင်ကိုထွက်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လျှောက်လှမ်းလာတဲ့ တစ်ချိန်လုံး နှင်းမုန်တိုင်းက မကြဲသေးဘဲ ကျနဆဲပါ။ တစ်နာရီလောက်အကြာမှာတော့ တဖြေးဖြေးပါးသွားပြီး နေလုံးကြီးဟာ တောင်ကြားတွေထဲ ပြန်လည်တောက်ပလာပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်သွားရာ လမ်းတလျှောက် တောင်ကုန်းတွေကို တက် လမ်းကြောရှည်တွေကို သွက်လိုက် နှေးလိုက်လျှောက်လှမ်းလိုက်နဲ့ လာလိုက်တာ ရည်မှန်းထားတဲ့ တောင်ပေါ်မရောက်ခင် ကြားတစ်ကွေ့အမှာတော့ ကျွန်တော့်အစီအစဉ်တွေကို တစ်နည်း တစ်ဖုံပြောင်းလဲသွားစေမယ့် တစ်စုံတစ်ခုကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ Garfereas ရှိရာတောင်ကုန်းနဲ့ ကျွန်တော်အခုရပ်နေတဲ့ တောင်ကုန်းနှစ်ခုကြားမှာ တော်တော့်ကိုကြီးမားတဲ့ ၀ိဥာဉ်တွေရဲ့ စခန်းကြီးတစ်ခုက အခိုင်အခန့်ကိုရှိနေတာလေ။ ၀ိဥာဉ် သရဲတွေ ဦးရေဘယ်လောက်များများ တိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာ ပါဝါသိပ်မရှိတတ်ကြတာကြောင့် ကျွန်တော်သူတို့ကိုသွား တိုက်ဖို့ သူတို့ရှိနေတဲ့ တောင်ကုန်းပေါ်ကိုတက်သွားရမလား၊ ဒါမှမဟုတ် အခြားဘက်ကနေ ကွေ့ဝိုက်ပြီးမှ သွားလိုရာ ခရီးကို ဖြတ်သန်းသွားရမလား ဆုံးဖြတ်ရခက်ပါရဲ့။
ကျွန်တော် ရွေးချယ်စရာသိပ်မရှိတဲ့အတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကို ချကာ မတ်တပ်ထရပ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ မှင်စာတွေသရဲတွေ စခန်းချနေတဲ့တောင်ကုန်းရှိရာကို ဦးတည်လျှောက်သွား လိုက်ပါရော။ လမ်းခရီးတစ်ဝက်လောက်အရောက် သူတို့စခန်းကိုစောင့်ကြပ်နေတဲ့ တစ်ယောက်က သတိထားမိသွားပုံ ပေါ်တယ်။ ၇ယောက်လောက် ကျွန်တော်ရှိရာကို ပြေးလာကြပြီး လက်နက်တွေဆွဲထုတ်ကာ တိုက်ခိုက်ပါရော။ ကျွန်တော့်ဆီ မရောက် ခင်မှာပဲ နှစ်ယောက်လောက်က ကျွန်တော့်မျှားချက်နဲ့အတူလဲကျသွားပါတယ်။ နောက်ကျန်တဲ့သူတွေဟာလည်း လေပွေမွှေ့သလို တိုက်ခိုက်တဲ့ ကျွန်တော့်ဓားချက်များအောက်မှာ လဲကျကုန်ပါတယ်။ အခြားသော စခန်းက ၀ိဥာဉ်တွေက ကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်မှုကို သတိထားမိပုံမပေါ်ဘူးဗျ။ ရုတ်တရက် ဟိုသည်ကြည့်လိုက်တော့ ကျွန်တော်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ ၇ယောက်လုံး မြေပြင်ပေါ်မှာလဲနေတာမဟုတ်ဘူး ၆ယောက်ပဲမြေပြင်ပေါ်မှာရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်။ စခန်းရှိရာကိုကြည့် လိုက်တော့ တစ်ယောက်သော ၀ိဥာဉ်က စခန်းရှိရာကို ဦးတည်ပြေးလွှားနေတာကိုမြင်ရပါရဲ့။ ကျွန်တော့်မျှားနဲ့လှမ်းပစ်လို့ ရမယ့်အကွာအဝေးထက်ဝေးသွာပြီဆိုတော့ ကျောမှာလွယ်ထားတဲ့ ဓားရှည်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးအသင့်အနေအထားနဲ့ခပ်ဖြေးဖြေး လျှောက်သွားလိုက်ပါတယ်။
ခဏခြင်းမှာပဲ ရာချီလောက်မယ့် ၀ိဥာဉ်ကောင်တွေဟာ ကျွန်တော်ရှိရာဘက်ကို လှိုင်းလုံးကြီးသဖွယ်လှိမ့်ချလာတာ ကိုတွေ့ ရတာကြောင့် သူတို့နဲ့ဝေးရာကို မြန်နိုင်သမျှခြေကုန်သုတ်ပြေးရပါတော့တယ်။ ၀ိဥာဉ်ကောင်တွေ ကျွန်တော်နောက်ကိုပြေး လိုက်လာကြပေမဲ့ ခဏအကြာမှာတော့ သူတို့စခန်းရှိရာကိုပြန်လှည့်သွားကြပါရော။ ကံကောင်းတယ်ပြောရမှာပေါ့ နို့မို့ဆိုရင် သေပြေးရှင်ပြေးအချိန်အတော်ကြာပြေးနေရဦးမှာ။
အမှတ်မထင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာလေးက ခဏဆိုပေမယ့် ပြေးလိုက်ရတာ မောကြောပါပဲ။ အခု တောင်ကြားဒေသကြီးရဲ့ အရှေ့ ဘက် ခြမ်းကိုရောက်လာပြီ။ တဖြည်းဖြည်း အမှောင်ထုဖုံးလွှမ်းလာပြီးနောက် ရာသီဥတုက အေးအေးလာလိုက်တာ နောက်တစ်နေ့ မနက်အရောင်မှာတော့ နှင်းဖွေးဖွေးတွေ တဖွဲဖွဲကောင်းကင်ပေါ်ကနေ ခုန်ဆင်းနေကြရော။ သမင်တစ်ကောင်ကို ကျွန်တော်ပစ်သတ်လိုက်တယ် အစားအစာအတွက်ပေါ့နော်။ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ ရည်မှန်းမိရာ လမ်းကြောင်းအတိုင်းရှေ့ဆက်သွားလိုက်တာ နာရီအတော်ကြာကြာသွားပြီးနောက်မှာတော့ အပင်ကြီးကြီးမားမားမရှိသည့် ကွင်းပြင်ကျယ်ကြီးတစ်ခုကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ကွင်းပြင်ကျယ်ကြီးရဲ့ တစ်ဖက်မှာတော့ Garfereas ရဲ့တောင်ကုန်းကြီး ကိုမြင်ခဲ့ရတယ် ဆိုပါတော့။ ကွင်းကြီးကို ဖြတ်သန်းပြီးလျှောက်ဖို့ ဘာမှအချိန်ဆွဲနေစရာမလိုဘူး စတင်ဖြတ်သန်းပြီးဝင် လိုက်တယ်။ အဆုံးထိရောက်ဖို့ နှစ်ချီမလားထင်ရတဲ့ ကျယ်ပြောမှုနဲ့အတူ တောင်ကုန်းကြီးကလည်း အတော်ဝေးဝေးမှာ လို့ထင်ရပါရဲ့။ ဒါပေမဲ့ နာရီနည်းနည်းလောက် လမ်းလျှောက်လိုက်ပြီးနောက်မှာတော့ တောင်ကုန်းကြီးရဲ့ အစပ်ကိုခြေချမိ ပါပြီ။
ကျွန်တော့် နောက်ကျောဆီက နေလုံးကြီးကလည်း တဖြည်းဖြည်း ကောင်းကင်ကနေ လျောကျသွားတာ မိုးကုတ် စက်ဝိုင်းထဲ ပုန်းဝင်တော့မယ်။ ဒီတော့ ကျွန်တော်လည်း ခပ်သေးသေးဂူတစ်ခုကို ရှာဖွေလိုက်ပြီး ညအိပ်စက်ဖို့ ရွေးချယ် လိုက်ပါတယ်။
ရက်များစွာ လျှောက်လှမ်းခဲ့ရသော နေ့ရက်တွေရဲ့ နောက်တစ်နေ့မနက်မှာ ကျွန်တော် နိုးထလာခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ပေါင်း များစွာ စောင့်စားခဲ့ရသောနေရာ Garfereas ကို ပြန်လည်တုန့်ပြန် ကလဲ့စားချေဖို့အတွက် ဖြစ်ပျက်လာတော့မယ့် ဒေသအမှန်ပဲ။ ကျွန်တော် အိပ်စက်ခဲ့သော ဂူလေးရဲ့အပြင်ကို လှမ်းထွက်လိုက်တယ်။ ရာသီဥတုက ကြည်လင်သာယာ နေတာများ တကယ့် စိမ်းလန်းနေသော ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ပြည့်စုံလွန်းနေရော။ ကျွန်တော် တောင်ကုန်း ထိပ်ဖက်ကို မော့ကြည့်လိုက်တယ်။ အဲ့ဒီနေရာမှာ တစ်ခုခုရှိနေတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်သိနေသလိုပဲ။ ဒီမကောင်းဆိုးရွား ကောင်ကြီးနဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ ဆုတောင်းခဲ့ရတာ အခုတော့ နီးကပ်လာပြီ။ လျှောက်လှမ်းခဲ့သော ခရီးတစ်ဝက်၊ တောင်လှမ်းခဲ့သော တောင် တက်လမ်း တစ်ဝက်ကို ဆက်တက်ဖို့ ကျွန်တော်စတင်လိုက်တယ်။
လမ်းတစ်ဆစ်ချိုးအရောက် အတော်ဆိုးရွားသောအဖြစ်အပျက်တစ်ခု ကျွန်တော်ကြုံဆုံခဲ့ရပါတယ်။ လမ်းသွယ်လေးတစ်ခုက နေချိုးအကွေ့ ခြေချော်ပြီး လျောကျသွားရော။ ကျောက်သားတွေက ခြေကုတ်မိစရာမရှိချောနေတာကြောင့် အစွန်အဖျားက လက်ကုတ်စရာ တစ်ခုကိုအားပြုပြီး ရှေ့ဆက်လျောမကျသွားအောင် ကြိုးစားလိုက်ရာက ပခုံးတစ်ဖက်က လေးနဲ့မြှားဘူး ကတော့ အောက်ကိုကျသွားပါတယ်။ ဆင်းပြီးကောက်ဖို့ကလည်း တင်နေတဲ့နေရာကနေ မြေပြင်ကိုပြန်ဆင်းဖို့ဆိုတာ တော်တော်လှမ်းတာကြောင့် လက်လျော့လိုက်ရပါပြီ။ Garfereas ကို ဓားရှည်တစ်လက်၊ ဓားမြှောင်ရှည် တစ်လက်၊ လှံတစ်ချောင်းနဲ့ တိုက်ခိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပစ်တယ်ဗျ။ အပေါ်ဘက်နားမော့ကြည့်လိုက်တော့ ကြီးမားလှတဲ့ ကျောက်ဆောင် ကြီး နှစ်ခုကြားမှာ လမ်းကြားလေးတစ်ခု က ကျောက်ဂူတစ်ခုရှိရာကို သွားဖို့ပြဆိုနေတယ်။ မြေပြင်ပေါ် ရောက်အောင် ပြန်ပြီးတက်လှမ်းကာ Garfereas ကိုသတ်ဖို့ ခပ်သွက်သွက်ကြိုးစားလိုက်ပါရဲ့။ တောင်ကုန်းထိပ်ကိုရောက် ဖို့သိပ်မသွား လိုက်ရပါဘူး ကြီးမားကျယ်ပြန့်သော ကျောက်ဂူတစ်ခု….ဟိုဟိုသည်သည်မှာ အရိုးကျနေသော တိရစ္ဆာန်တွေ နဲ့ အရာရာ ကိုအပေါ်စီးကနေမြင်နိုင်သောနေရာကြီးကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။
ကျွန်တော့်နှလုံးခုန်သံတွေဟာ ပုံမှန်ထက် နှစ်ဆပိုခုန်စပြုလာပါပြီ။ တစ်နေရာရာမှာ Garfereas ကြီး ကျွန်တော့်ကို လှဲလျောင်းစောင့်ဆိုင်းနေသလားပဲ။ ခပ်ရွယ်ရွယ် ကျောက်တုံးလောက်ကတော့ အသာပြတ်သွားနိုင်အောင် ခုတ်လို့ရတဲ့ ကျွန်တော့် ဆောင်ဓားရှည်ကို အသာထုတ်ထားလိုက်တယ် ရုတ်တရက် တနေရာရာက သူထွက်ပေါ်လာရင် အသင့်တိုက် ခိုက်နိုင်အောင်လို့ပေါ့။ ဂူဝကြီးနဲ့ တဖြေးဖြေးနီးလာတော့ ကျွန်တော့်ခြေသံများကြောင့်လား တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင် ကြောင့် သတိပြုမိလွယ်သွားတာလားမသိ ၀ပ်နေရာကနေ မတ်တပ်ထရပ်လာကာ အပြင်ကို ပြူထွက်လာရင်း ကျယ်ပြောလှ တဲ့ သူ့အတောင်ပံတွေကို ဖြန့်ကားပစ်လိုက်တယ်။ ဟန်နဲ့ မာန်ကြောင့် သူ့ကိုကျွန်တော် ကြောက်သွားမလားထင်နေပုံပဲ။ ကျွန်တော့်ကို မြင်တွေ့သွားတဲ့ခဏ စူးစမ်းချင်စိတ်ပြင်းပြစွာ အမေးစကားသံတွေ သူ့ဆီကထွက်လာပါရဲ့။
‘လူသား တစ်ယောက်? လူတစ်ယောက်ယောက်ကို ငါမမြင်ရတာ နှစ်တော်တော်ကြာပြီပဲ။ မင်းက ဘယ်သူလဲ? ဘယ်လိုလုပ် ငါ့တောင်ကုန်းပေါ်တက်လာခဲ့တာလဲကွ? ငါ့ကိုလာသတ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်?’ သူနည်းနည်းလေးမှ ထိတ်လန့်သွားပုံ မပေါ်ဘူး။ သူ့ပြောစကားအရ လူသားမစားဘဲ တခြားအကောင်ပလောင်တွေကိုပဲသူစားနေခဲ့တာဆိုတော့ ပျော်စရာပေပဲ။
‘ကျုပ်က ကျုပ်ရွာအတွက် ခင်ဗျားကြီးကို လက်တုန့်ပြန်မလို့လာတာ။ ခင်ဗျားကြီး ကျုပ်တို့တစ်ရွာလုံးကို သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ နေ့ကို အခုထိ မမေ့သေးဘူး’ သူမေးသမျှကို ကျွန်တော် ရဲရဲဝံ့ဝံ့ပဲပြန်ဖြေလိုက်တယ် ကြောက်ရွံ့မှုမရှိကြောင်းပြဆိုရာလည်း ရောက်တာပေါ့။ ‘မင်းရဲ့ ရွာ?’ သူ ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်ကိုရယ်မောတော့တာပါပဲ။
‘မင်းပြောတာ ဒီတောင်ကြားဒေသ မြောက်ဘက်စွန်းက ရွာတစ်ရွာကိုဆိုလိုတာလား?’
‘ဟုတ်တယ်၊ ကျုပ်ပြောတာ အဲ့ဒီရွာပဲ’ သူ့မျက်နှာကိုတည့်တည့်ကြည့်ပြီး ပြန်ဖြေပစ်လိုက်တယ်။ ထက်မြက်လှသော ကျွန်တော့်ဆောင်ဓားရှည်ကိုလည်း မသိမသာ အသင့်ကိုင်ထားလိုက်တယ် မီတာ ၂၀လောက်သာ ဝေးတဲ့ မားမားဖြစ်နေ သော နဂါးကြီးကို တိုက်ခိုက်ဖို့။ သူ ဘာစကားမှမပြောဘဲ အတန်ကြာငြိမ်သက်နေပြီးနောက် ‘ဒါဆိုရင်တော့ မင်း သေသင့် တာပေါ့’ လို့ တိတ်ဆိတ်ခြင်းကိုခွင်းကာ ကျွန်တော်ရှိရာကို အမြန်ဆုံးပျံသန်းလာပါတော့တယ်။ အပေါ်ကိုထိုးတက်သွားပြီးမှ ကျွန်တော့်အထက်ကနေ ဆင်းချလာရော။ ကျွန်တော် ရုတ်ခြည်းဆိုသလို သူ လူတွေကို ဘယ်လိုသတ်သလဲ သတိရသွား တယ်။ လျင်မြန်တဲ့ အတောင်ပံနဲ့ ချွန်မြလှသော သူ့အမြီးရှည်ကြီးကိုသုံးကာ တိုက်ခိုက် တာလေ။ သူ ကျွန်တော့်တည့် တည့်ကိုထိုးဆင်းလာတာကြောင့် ဘေးကို ရောက်နိုင်သမျှရောက်အောင် ခုန်ထွက် လိုက်တာ သူ့လောက်အမြန်မခုန်နိုင် တော့ သူ့အမြီးရဲ့ရိုက်ခတ်မှုကို ကျွန်တော့်ပခုံးနဲ့ လက်မောင်းတွေ အပြင်းအထန် ထိခတ်ခံလိုက် ရပါတယ်။ ကျွန်တော် မဟန်နိုင်စွာ ဒူးထောက်လဲကျသွားရပါရော။ ပြီးဆုံးသွားပြီလား? သူ့ကိုသတ်ဖို့ ကျွန်တော် မစွမ်းဘူး လား? လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး…..ကျွန်တော်လက်မခံနိုင်ဘူး။ နာကျင်နေပေမယ့် ကျွန်တော် ထရပ်လိုက် တယ်။
ကျွန်တော့် ဆောင် ဓားရှည်ကို လှမ်းကြည့်လိုက်တာ့ မီတာအတော်ဝေးဝေးမှာ ကမူစွန်းလေးတစ်ခုနား ထောင်ရက် သားလေးရောက် နေရော။ ကျွန်တော့် လက်နက်တွေနဲ့ သူ့ကိုတိုက်ခိုက်လို့ မရဘူး….အနီးကပ်ပျံသန်းတာမျိုးမလုပ်ဘဲ သူ့အမြီးအားကိုး နဲ့သာ ကျွန်တော့်ကို တိုက်ခိုက်နေတာလေ။ ကျွန်တော် ကြာကြာရပ်မနေနိုင်လောက်ဘူး တစ်ခုခုလုပ်ဖို့လိုနေပြီ။ Garfereas ကတော့ တဆုံးပျံသန်းသွားပြီး နောက်တစ်ခါ ကျွန်တော့်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ လှည့်လာနေပြီဗျ။ နောက်တော့ မီတာ အနည်းငယ် က ပွင့်နေသော လှိုဏ်ခေါင်းငယ်လေးတစ်ခုကို တွေ့မြင်မိတယ်။ Garfereas အတွက် သေးငယ်ပေမယ့် ကျွန်တော့်အတွက် ကောင်းကောင်း ၀င်ဆံ့နိုင်တဲ့နေရာ။ ကျွန်တော် ခြေလှမ်းအနည်းငယ်ကိုအစပျိုးလိုက်တယ်။ သုံးမီတာလောက်တော့ တည့် တည့်လျှောက်ရဦးမယ်။ နာကျင်လှတဲ့ သွေးတွေအရမ်းထွက်နေသော လက်အစုံကြောင့် ခဏတော့ တုန့်ဆိုင်းမိသွားတယ်။
‘ဟား…..ဟား….မင်းပုန်းဖို့နေရာ တစ်နေရာမှမရှိဘူးကွ။ ဒီတောင်ကုန်းတစ်ခုလုံးနေရာလပ်မကျန် ငါသိတယ်’
ကျွန်တော် သူ့စကားသံကြောင့် နည်းနည်းတုန့်ဆိုင်းမိပေမယ့် ခုန်ဝင်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော်ကံကောင်းတယ်ဆိုရမယ် လှိုဏ်ခေါင်းအောက်ခြေက နှင်းတွေနဲ့ဖုံးလွှမ်းထားတာကြောင့် ထိခိုက်မှုမရှိလိုက်ပေမယ့် နာကျင်နေတဲ့ လက်မောင်းတွေ အတွက်တော့ ချွင်းချက်ပါ။
နာကျင်မှုဒဏ်က ဘယ်လိုမှ သည်းမခံနိုင်စရာပါပဲ။ အိထွေးနေသော နှင်းတွေပေါ်ဝယ် မရွှေ့မပြောင်းနိုင်ဘဲ လှဲလျောင်း နေမိပါတယ်။ ‘မင်း အဲ့ဒီအထဲမှာ သွေးထွက်လွန်ပြီးသေရင်သေ မသေလို့အပြင်ထွက်လာတာနဲ့ ငါကသတ်မှာပဲ’ Garfereas က လှိုဏ်ဂူဝကနေ လှမ်းအော်ပြောတော့ ကျွန်တော့် မျှော်လင့်သောဆန္ဒတွေဟာ တဖြည်းဖြည်းမှေးမှိန်လာပါရဲ့။ အခု ကျွန်တော် ဘာလုပ်သင့်သလဲ? အပေါ်ကိုပြန်တွယ်တက်ဖို့ဆိုတာကလည်း နာကျင်နေတဲ့ လက်တွေကြောင့် ပြန်မတ်တပ် ရပ်မိပြန်တော့ လုပ်စရာဗလာ။ လေးမြှားတွေလည်း မရှိတော့….လက်နက်ကြီးဆိုလည်း အဝေးမှာလွင့်ကျနေခဲ့ပြီ။
ဟိုသည် တွေးနေမိစဉ်ခဏ လေအေးတစ်ချက်ဝေ့ကနဲတိုက်ခတ်လိုက်တာကိုခံစားလိုက်ရပါတယ်။ တောင်ကြားလေတွေ တိုက်ခတ်နေ တာကို ကျွန်တော် နောက်ကျောဘက်ဆီကနေ သိမိရတာပေါ့။ ဟုတ်တာပေါ့ ဒီလှိုဏ်ဂူငယ်လေးမှာ အခြားသော ၀င်ပေါက် ထွက်ပေါက်ရှိနေနိုင်တာပဲ။ ကျွန်တော်အပေါက်လေးကနေ တွားသွားလိုက်ပြီးနောက် လမ်းအဆုံးမှာတော့ လှိုဏ်ဂူ အကျယ်ကြီးကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။ ကျွန်တော် ခပ်ဖြေးဖြေးထရပ်လိုက်ကာ ငြိမ်သက်ရင်းခဏတော့ အနားယူမိရပြန်ရော။ မကြာခင်မှာပဲ လှိုဏ်ခေါင်းအဆုံးကိုရောက်လို့ ထွက်ပေါက်ကိုတွေ့တာကြောင့် အပြင်ကို ခပ်ရွံ့ရွံ့ထွက်လိုက်တယ်။ တောင်ကြောရဲ့ အလယ်လောက်ကိုပေါက်ထွက်နေပြီး လမ်းဆုံကို မီတာအနည်းငယ်လောက်သာ ဝေးကွာတယ်ဗျ။
‘ထွက်ပြေးဖို့ ကြိုးစားနေတာလား?’ ကျွန်တော့်နောက်ဖက်ကနေ Garfereas အသံကိုကြားလိုက်ရတယ်။ နောက်လှည့် ကြည့်လိုက်စဉ်မှာတော့ သူ ကျွန်တော့်ဆီပျံသန်းလာပြီး နောက်တစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်ဖို့သူဟန်ပြင်တယ်။ ဒီတစ်ကြိမ်တော့ နံဘေးကို ကောင်းကောင်းခုန်ဆုတ်နိုင်လိုက်ပေမယ့် မြေပြင်ပေါ် ခြေအကျမှာတော့ ညာဘက်လက်ဆုံဆီက နာကျင်မှု ကြောင့် ဒူးညွတ်ကျသွားမလိုဖြစ်သွားသေးရဲ့။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားတင်းကာ အပြေးလေး ကျောက်ဆောင် နောက်ကို ကွယ်လိုက်ပါတယ်။ ကျောက်ဆောင်နား ဟိုသည်အရွှေ့မှာ တစ်စုံတစ်ခုဟာ မြေပြင်ပေါ်ကိုလဲကျသွားတယ်။ မြေပြင်ပေါ်မှာ အသာထိုင်ပြီး ငြိမ်နေမိစဉ်မှာတော့ ကြာရှည်မပုန်းနိုင်ဘူးဆိုတာ သတိထားမိပါရဲ့။ ကျွန်တော့်ပခုံးဆီက ယိုဆင်းနေတဲ့ သွေးကြောင်းရှည်က နှင်းခဲဖွေးဖွေးမှာ စွပ်ကြောင်းလိုဖြစ်နေတော့ ကျွန်တော်ဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာ Garfereas ကို တိတိကျကျပြောပြနေသလိုဖြစ်နေတယ်လေ။ ကျောက်ဆောင်မှာ ခဏထိုင်ပြီးမှီနေတော့ မျက်နှာချင်းဆိုင် နားမှာ တုတ်ချောင်းတစ်ခုလိုလိုက နှင်းတွေဖုံးပြီးထူးခြားနေတယ်။ လက်နဲ့စမ်းကြည့်လိုက်တော့ သစ်မြစ်တစ်ခု အဲ..သစ်မြစ် မဟုတ် ဘယ်လိုအချောင်းအတံမျိုးပါလိမ့်လို့ စူးစမ်းကြည့်တာ….ဒါ…ဒါ ကျွန်တော့်ဆောင်ဓားရှည်ပဲ။ ပထမအကြိမ် ခုန်ဆုတ်တုန်းက လွင့်သွားတာကို မှတ်မိလိုက်တယ်။ ကျွန်တာ် အချိန်ကြာကြာမစဉ်းစားနိုင်ပါဘူး Garfereas က သူ့ပါးစပ်ကြီးကိုဖြဲပြီး ကျွန်တော်ရှိရာကိုပျံသန်းလာနေပြီ။ ဒီတစ်ခါတော့ သူ ကျွန်တော်ရှိရာကို တည့်တည့်ကြီးလာနေတာ။
Garfereas ကျွန်တော့်လက်ထဲမှာ ဆောင်ဓားရှည်ခပ်ပါးပါးကိုလက်နဲ့ကပ်ပြီးကိုင်ထားတာကို မမြင်ဘူး။
ကျွန်တော် ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို ညွှတ်ကျမသွားအောင် မတ်မတ်ရပ် ဆောင်ဓားကို အရင်းကနေ သေချာကိုင်ပြီး တိုက်ကွက်အသင့်ပြင် ထားပါတယ်။ Garfereas ကျွန်တော့်မျက်နှာနဲ့ အနီးဆုံးကပ်ကာ တောင်ပံကိုခတ်ရင်း အမှီးကိုရမ်း လိုက်ချိန်ဝယ် သူ့မျက်လုံးတွေကို နှင်းခဲတွေဆုပ်ပြီး ပစ်ထည့်လိုက်တာ သူ ခေါင်းငဲ့စောင်းချိန် ပြန်လှည့်ချိန်မရတော့ဘူး။ အချိန်ကောင်း အခွင့်ကောင်းမှာပဲ ကျွန်တော်ခုန်ပြီး သူ့လည်မျိုကို ဓားနဲ့ထိုးစိုက်ပစ်လိုက်တယ်။ နဂါးကြီးဟာ နာကျင်မှု ကြောင့် သူ့ ပစ်မှတ်ကို မတိုက်ခိုက်နိုင်ပေမယ့် ရိုက်ခတ်သော သူ့အတောင်ပံနှင့် ခြေသည်းတွေက ကျွန်တော့် ညာဘက် ပခုံးကို အဖျားခတ်သွားပါသေးရဲ့။ ကျွန်တော် နာကျင်မှုကို အားတင်းရင်း ယိမ်းယိုင်ကာ ခပ်ဝေးဝေးမလှည့်နိုင်သေးတဲ့ နဂါးကြီးကို ထပ်မံမျက်နှာချင်းဆိုင်လိုက်ပါတယ်။ လည်မျိုထဲ တစ်ဝက်နီးပါးဝင်နေတဲ့ ဓားရှည်အရိုးကို ကျွန်တော် ခုန်ပြီး ထပ်ကန်လိုက်တာနာကျင်မှုကြောင့် သူ့နံဘေးကိုအယိမ်း ကျောက်ဆောင်နဲ့ ဓားအရိုးရိုက်မိကာ တဆုံးဝင်သွားပြီး သူ့နှလုံးအိမ်ထဲ စိုက်ဝင်သွားရော။
နာကျင်ခံခက်စွာ အသားကုန် အော်ဟစ်လိုက်သော အသံဟာ တောင်စဉ်အထပ်ထပ်ကို ပျံ့နှံ့သွားသလားထင်ရအောင် ပဲ့တင်ထပ်ကုန်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးထွက်သက်နဲ့ အသက်ငင်တာတွေကို သူနေထိုင်ရာဂူနဲ့ မနီးမဝေး နှင်းခဲပြင်ပေါ်ဝယ် ပြုလုပ်သွားခဲ့သေးတာပါ။ Garfereas ဆိုတာ မရှိတော့ဘူး အဆုံးသတ်သွားပါပြီ။
အမှန်တကယ် အမှန်တကယ်ကြီးကို ကျွန်တော့်ဘ၀မှာ အလုပ်ချင်ဆုံးအလုပ်တစ်ခုက ပြီးမြောက်သွားပြီလား။
ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံးနာကျင်ကိုက်ခဲမှုကြောင့် ဘယ်အစိတ်အပိုင်းမှ တစ်လက်မတောင်မရွေ့နိုင်ခဲ့ပါ။ အသက်ရှူဖို့ လည်း သိပ်မဖြစ်ချင်တော့။ ကျွန်တော် တကယ့်ကို နောက်ဆုံးအခြေအနေတစ်ခုစီရောက်ခဲ့ပါပြီ။
ကျွန်တော့်ပတ်ဝန်းကျင်က နှင်းဖွေးဖွေးတွေဟာလည်း ကျွန်တော့်ကိုယ်ကထွက်သောသွေးတွေကြောင့် အရောင်ပြောင်းကာ ဆွေးဆွေးနီနေရောလေ။ ဟိုးငယ်စဉ်တုန်းကမြင်ခဲ့ရဖူးသော သွေးရောင်လွှမ်းသည့်မြင်ကွင်းမျိုးပါပဲ။ လှုပ်ရှားဖို့မရတော့သည့် ညာဘက်လက်မောင်း ဆီကိုငဲ့ကြည့်လိုက်တော့ ခါးမှာချိတ်ဆွဲထားစဲ အဖေ့လက်ဆောင် ဓားမြှောင်ရှည်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။
‘အဖေ…..ကျွန်တော်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီ။ နှစ်များစွာက အဖေနဲ့ ကျွန်တော်တို့မိသားစုကို သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ နဂါးကြီးကိုသတ်နိုင်ခဲ့ပြီ’
ကျွန်တော် ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ဂုဏ်ယူတယ်။ ကျွန်တော့်ဘ၀ဟာ တစ်စုံတစ်ခုသော ရည်မှန်းချက်ကိုပြုလုပ်ဖို့ ရှည်လျား နေခဲ့ရတာ။ အခုတော့ ကျွန်တော့်ဘ၀ထဲက ကျွန်တော့်မြင်ကွင်းကလူတွေ ချစ်သူခင်သူမုန်းသူပါမကျန် အကုန်လုံးကို ဆွဲခေါ်သွားတဲ့သူကို ကျွန်တော်ခြေမှုန်းနိုင် ကလဲ့စားခြေနိုင်ခဲ့ပြီ။ အခုတော့ အရာအားလုံး အဆုံးသတ်ပြည့်စုံပြီ။
သေခြင်းတရားဟာ တဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာသလို ကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်။ ကျွန်တော်သိတယ် အသက်ရှင်သန်ဖို့ မိနစ် အနည်းငယ်ပဲကျန်တော့တယ်ဆိုတာ။ ဒါပေမဲ့ သေဖို့ကျွန်တော်လုံးဝမကြောက်ဘူး။ သေမင်းက သေခြင်းတရားဆိုတာ ဘယ်လိုဖြစ်ကြောင်း ပြသပေးခဲ့တာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၇နှစ်ကတည်းကဆိုတော့ လုံလောက်နေပါပြီ။
ကျွန်တော် နာကျင်ခက်ခဲလှသော နောက်ဆုံးဝင်သက်ထွက်သက်ကို ရှူရှိုက်လိုက်ပါတယ်။ အရာအားလုံး တဖြည်းဖြည်းေ၀၀ါး ပျောက်ကွယ်မသွားခင် ကျွန်တော် ကိုယ့်ဖာသာပဲအမေးထုတ်လိုက်တယ်။
‘ဘ၀တစ်ခုမှာ အသက်ရှင်သန်နေထိုင်နေခဲ့ခြင်း ရလဒ်ကို မင်းကျေနပ်ရဲ့လား?’
အခုတော့ ဒီမေးခွန်းရဲ့အဖြေကို ကျေကျေနပ်နပ်ဖြေနိုင်ပါပြီ။
~ Alex Aung (26 September 2014)
**Reference: Alone In the Valley - RcaH
Posted by Alex Aung at 10:40 AM No comments: